YEYINTNGE(ကနဒေါ): Thursday, June 12
BY YeYint Nge ... 6/12/20080comment
ကျယ်သည်။Greater Toronto Area သည်ပင်လျှင်ရန်ကုန်တိုင်းနှင့်စကာင်္ပူနိုင်ငံလောက်ရှိသည်။ဒါကြောင့်လို
အချင်းချင်းညီညွတ်ကြပါ။GLOBLE ACTIONs တွေအမြန်လုပ်ပေးပါ...ကုလသမ္မဂမနေနိုင်အောင်အမြဲတမ်း
“The idea that sovereign states have responsibility to protect their own citizens from avoidable catastrophe, but that when they are unwilling or unable to do so, that responsibility must be borne by the broader community of states.”
-International Commission on Intervention and Sovereign States (ICISS).
ကမ္ဘာကပေးတဲ့ အကူအညီတွေ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာအောင် လုပ်နေတဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရမျိုးကို နိုင်ငံတကာက စစ်အင်အားသုံး ၀င်ပြီး မြန်မာဒုက္ခသည်တွေ ကူညီသင့်တယ်ဆိုတဲ့ဘက်က ထောက်ခံပြောဆိုသူတွေရှိသလို စစ်ရေးနည်းမသုံးဖို့ သတိပေးတဲ့သူတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အစိုးရတရပ်အနေနဲ့ မိမိပြည်သူတွေအပေါ် ကာကွယ်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ဘူးဆိုရင် လူမှုရေးကိစ္စ အခြေခံပြီး နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းက စစ်ရေးနည်းနဲ့ ၀င်စွက်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အင်္ဂလိပ်လို Responsibility to Protect လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အခေါ်ရလွယ်အောင် အာတူးပီ (R2P) ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံး အတိုကောက်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ သုံးနှုန်းလေ့ ရှိပါတယ်။
အာတူးပီဖြစ်လာတဲ့အကျဉ်းချုပ်ကတော့ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များအတွင်း ရ၀မ်ဒါနဲ့ ဘော့စနီးယား ဟာဇီဂိုဗီးနားက Srebrenica ဒေသတွေမှာ ရက်စက်တဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေအပြီး ဒါမျိုးတွေ မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုပြီး ကနေဒါအစိုးရက စတင်လောဆော်ခဲ့ပါတယ်။ ဒိနောက်၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ အာတူးပီ Mandate ကို ကုလသမဂ္ဂက အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ချုပ်ပြောရရင် အာတူးပီသုံးဖို့ အဓိက အခြေအနေ (၄) မျိုး လိုပါတယ်။ လူအစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်နေတဲ့ အခြေအနေမျိုး (Genocide) လူမျိုးစုတွေ မျိုးတုံးအောင်သတ်ဖြတ်နေတဲ့ အခြေအနေမျိုး (ethnic cleansing)၊ စစ်ရာဇ၀တ်မှုတွေ ကျူးလွန်နေတဲ့ အခြေအနေမျိုး(War Crimes) နဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ် ရက်ရက်စက်စက် ကျူးလွန်နေတဲ့အခြေအနေမျိုး (Crime against humanity) တွေမှာ အာတူးပီသုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီး တိတိကျကျ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတခုမှာ ဒီလိုအခြေအနေတခုခု ဖြစ်နေရင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းက စစ်ရေးနည်းနဲ့ဝင်ပြီး အကာ အကွယ် ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်ပါတယ်။
ခုဆိုရင် ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းတွေတင်ထားတဲ့ အနောက်နိုင်ငံစစ်သင်္ဘောတချို့ မြန်မာကမ်းခြေနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ရောက်နေသလို တချို့နိုင်ငံတွေကလည်း စစ်အစိုးရခွင့်ပြုချက်မယူဘဲ လေကြောင်းကနေ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ချပေးသင့်တယ်လို့ ဖိအားပေးနေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အာတူးပီသုံးဖို့ အခြေအနေရှိသလား ဆန်းစစ်ဖို့လိုပါတယ်။
အာတူးပီထောက်ခံတဲ့ အနောက်အုပ်စုတွေကတော့ သဘာဝ မုန်တိုင်းအန္တရာယ်အပြီးမှာ မြန်မာ စစ်အစိုးရက ပြည်ပအကူအညီတွေ ကြန့်ကြာအောင် လုပ်နေတဲ့အချက်ကို ပြည်သူတွေ အပေါ် ရက်ရက်စက်ကျူးလွန်နေတဲ့ အခြေနေမျိုး (Crime against humanity) လို့ စွပ်စွဲပါတယ်။ ဒီစွပ်စွဲချက်ဟာ မူလ အာတူးပီလုပ်ပိုင်ခွင့်ပါ အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မလိုဘဲ အင်အားကြီးအနောက်နိုင်ငံတွေက မြန်မာ နိုင်ငံထဲကို စစ်အင်အားသုံးဝင်ဖို့ ကိုယ့်ဘာသာ ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့ အာတူးပီထောက်ခံသူတွေက ယူဆပါတယ်။
ဒီအဆိုကို International Crisis Group (ICG) ကလည်း ထောက်ခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်အင်အား သုံးဝင်ဖို့ လမ်းခင်းပေးတဲ့အချက်လို့ ထောက်ပြပါတယ်။ တဘက်ကကြည့်တော့လည်း ICG ဥက္ကဋ္ဌ Gareth Evans ဟာ Australia နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်သလို အာတူးပီကို ကုလသမဂ္ဂက အသိအမှတ်ပြုလာအောင် တချိန်က ဦးဆောင်စည်းရုံးခဲ့သူ ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အာတူးပီကို ထောက်ခံတဲ့ သူ့အမြင်ဟာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါဘူး။ ဂျာမန်အစိုးရ ပါလီမန် အမတ်တွေထဲမှာလည်း အာတူးပီထောက်ခံသူတွေရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်အင်အားသုံးဝင်ဖို့ သဘောတူပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို အာတူးပီသုံးပီ စစ်ရေးနည်းနဲ့ ၀င်စွက်မယ်ဆိုရင် တခြားနိုင်ငံတွေပါ အလားတူ စစ်ရေးနည်းနဲ့ ၀င်စွက်နိုင်ဖို့ နမူနာဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက် ထင်ရှားတဲ့ ဂျာမန်နိုင်ငံရေးသမားတွေ ထောက်ခံတဲ့ အနောက်နိုင်ငံ ဖိအားပေးအုပ်စုတွေကပါ အပူတပြင်း တောင်းဆိုနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ထင်မြင်သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အာတူးပီသုံးပြီး မြန်မာနိုင်ငံထဲကို စစ်ရေးအင်အားနဲ့ ၀င်မယ်ဆိုရင် ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ စရိတ်နဲ့ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီး ကုလသမဂ္ဂ လူမှုရေးရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (UNOCHA) က သတိပေးထားပါတယ်။ အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေကတော့ အာတူးပီဟာ အစိုးရ အပြောင်းအလဲ လုပ်နိုင်အောင် အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ စစ်ရေးနည်းကြိုးပမ်းချက်တွေအတွက် ကြိုပြီး အကာအကွယ်ယူထားတာလို့ ယူဆပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ပါမောက္ခ Edward Luck ရဲ့အမြင်ကို ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ ပါမောက္ခ Edward Luck ဟာ အာတူးပီလုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အထူးအကြံပေးအရာရှိအဖြစ် ဒီနှစ်ဆန်းပိုင်းကမှ ကုလသမဂ္ဂက ခန့်အပ်ခြင်းခံရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါမောက္ခ Edward Luck ကတော့ အာတူးပီသုံးပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်း စစ်ရေးနည်းနဲ့ ၀င်ရောက်ဖို့ ကိစ္စကို သဘောမတူပါဘူး။ အစိုးရတရပ်က စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ အခြေအနေလေးမျိုးထဲက တမျိုးမျိုး ကျူးလွန်နေရင်သာ အာတူးပီသုံးဖို့ လိုပြီး တခြားကိစ္စတွေအတွက် သဘောတူထားတာ မရှိတဲ့အချက်ကို သတိပြုဖို့ လိုတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအရေးမှာ အာတူးပီသုံးရင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ပါမောက္ခ Edward Luck က ခုလို မြင်ပါတယ်။
-သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်နေတာ ကူညီမယ့်ကိစ္စ မတုံ့ပြန်ဘဲ လုပ်နေတဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ပြည်သူတွေအပေါ် ရက်ရက်စက်ကျူးလွန်နေတဲ့အခြေနေမျိုး (Crime against humanity) ရောက်နေပြီဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေရှိပေမယ့် ဒီအချက်ဟာ ဥပဒေပညာရှင်တွေကြား အချေအတင် ဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။
-လေကြောင်းကနေ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အစားအစာတွေ ချပေးမယ်ဆိုရင်လည်း မြေပြင်မှာ လူတွေရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ကုန်နိုင်တယ်။
-မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကလည်း ခုဆိုရေလွှမ်းနေသေးတယ်။ မြေပြင်မှာ လူကိုယ်တိုင် ဖြန့်ဖြူးပေး သလောက် မထိရောက်နိုင်ဘူး။
-လိုချင်တဲ့နေရာ အတိအကျ ပစ္စည်းချပေးနိုင်ဖို့ အတော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။
-မြန်မာလေပိုင်နက်ကို ကျူးကျော်တာဟာ ပြင်ပကမ္ဘာကို စစ်အစိုးရက ပိုပြီး သံသယဖြစ်စေနိုင် တယ်ဆိုတဲ့ ဒီအချက် (၅) ချက်ကို အာတူးပီရေးရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးအကြံပေးအရာရှိ ပါမောက္ခ Edward Luck က ထောက်ပြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အာတူးပီဟာ ရ၀မ်ဒါနိုင်ငံမှာ တချိန်က လူ (၈) သိန်းကျော် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်တာမျိုး မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်တာမို့ အာဖရိကနိုင်ငံတွေက အာတူးပီလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ထောက်ခံတယ်ဆိုတာကိုတော့ ပါမောက္ခ Edward Luck က ၀န်ခံပါတယ်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Bernard Kouchner ကတော့ မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေပေးမယ့် နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေ မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ခံလာအောင် လုံခြုံရေးကောင်စီက စစ်အစိုးရကို ဖိအားပေးသင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လုံခြုံရေးကောင်စီဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရကို အကူအညီတွေ လက်ခံလာအောင် မလုပ်နိုင်ရင် သတ္တိကြောင်တယ်လို့ ခံစားထိုက်ကြောင်း Le Monde ပြင်သစ် သတင်းစာမှာ Mr Kouchner က ရေးပါတယ်။
မြန်မာကမ်းရိုးတန်းနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေတင်ပြီးစောင့်နေတဲ့ ပြင်သစ်စစ်သင်္ဘောLe Mistral ရှိနေတယ်ဆိုပေမယ့် ပြဿနာက သင်္ဘောပေါ်က ကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းတွေ ကုန်းပေါ်ရောက်တာနဲ့ ဘယ်သူက တာဝန်ယူမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအကူအညီပစ္စည်းတွေ ဒုက္ခသည်လက်ရောက်အောင် မေ (၂၅) ရက် အာဆီယံ အစည်းအဝေးက လမ်းခင်းပေးနိုင်မယ်လို့ ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက မျှော်လင့်ပါတယ်။
အာတူးပီသုံးပြီး မြန်မာနိုင်ငံထဲကို စစ်ရေးနည်းနဲ့ဝင်ရင် ဘာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ညာဖြစ်နိုင်တယ် ထောက်ပြသူတွေအနေနဲ့ စစ်ရေးနည်းဟာ အာတူးပီ လုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲက မတတ်သာမှ သုံးရမယ့် နောက်ဆုံးနည်းလမ်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိချပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ကနေဒါနိုင်ငံ Winnipeg တက္ကသိုလ် ဥက္ကဋ္ဌ Lloyd Axworthy ကလည်း သူ့အမြင်ကို ဖော်ထုတ်ပါတယ်။
အစိုးရတွေ ကိုယ့်ပြည်သူကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိလာအောင် ဖိအားပေးတဲ့နေရာမှာ ကျယ်ပြန်တဲ့ သံတမန်ရေးနည်းလမ်းတွေ၊ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတွေသုံးပြီး သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတွေကို ဖိအားပေးတဲ့နည်းတွေလည်း ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အာတူးပီလုပ်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာ ပါနေပါတယ်လို့ Lloyd Axworthy က ပြောပါတယ်။
ပြောရရင်တော့ အပြစ်မရှိသူတယောက်ဟာ AK-47 မောင်းပြန်သေနတ်နဲ့ အပြစ်ခံရလို့ သေသေ၊ နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေ မရအောင် အပိတ်ခံထားရလို့ အစာငတ်သေသေ အခြေခံအားဖြင့် အာတူးပီနဲ့ အကျုံးဝင်ပါတယ်လို့ Lloyd Axworthy က ဆက်ပြောပါတယ်။
ဆူဒန်နိုင်ငံ ဒါဖာ နဲ့ ကွန်ဂိုလိုကိစ္စတွေမှာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းက ထိထိရောက်ရောက် မကူညီနိုင်ခဲ့တာတွေကိုကြည့်ရင် အာတူးပီဟာ ထောက်ခံသူများများလိုနေတယ်၊ ဒိထက်တိုးတက် အောင် ပြုပြင်ဖို့ လိုနေတယ်လို့ပါ သူကပြောပါတယ်။
ဒါပြင် မြန်မာနိုင်ငံမုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေအရေးမှာ အာတူးပီသုံးနိုင်ရင် အထူးသဖြင့် အာရှနိုင်ငံ တွေအတွက် အာတူးပီနိုင်ငံတကာစံနှုန်းရဲ့ အရေးပါမှုကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ဖော်ထုတ်ပြသရာ ရောက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကနေဒါနိုင်ငံ Winnipeg တက္ကသိုလ် ဥက္ကဋ္ဌ Lloyd Axworthy က ယူဆပါတယ်။
BY YeYint Nge ... 6/12/2008 1 comment
ဒေါ်စုသည် ကြိမ်နဲ့ ရိုက်ဆုံးမရမည့် "လူဆိုးလေး" ဟု စစ်အစိုးရပြော
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 12 2008 18:38 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ မြန်မာစစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးနှင့် အေးချမ်း သာယာရေးကို နှောက်ယှက် ခြိမ်းခြောက်သူ ဖြစ်သည့်အတွက် ကြိမ်နဲ့ ရိုက်ဆုံးမရမည့် "လူဆိုးလေး" ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
“လူဆိုးလေး” ဟု စွပ်စွဲခံနေရသည့် ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ။ ။ မဇ္ဈိမ။လက်ရှိဥပဒေအရ ပြဌာန်းထားသော ကန့်သတ်ကာလထက် ကျော်လွန်ကာ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ဆက်လက် ချုပ်နှောင်ခြင်းကို စစ်အစိုးရက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ခုခံ ပြောဆိုရာတွင် သူမသည် လက်နက်စွဲကိုင် တိုက်ခိုက်နေသော အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများကို နေအိမ်တွင် လက်ခံထားခြင်း၊ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံခြား အစိုးရများထံမှ ငွေကြေး ပစ္စည်း လက်ခံရယူခဲ့ခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
"အမှန်ကတော့ ကျောင်းပေါ်ခေါ်ပြီး ကြိမ်နဲ့ မှတ်လောက် သားလောက်အောင် ရိုက်ရမယ့် လူဆိုးလေးတွေပါဗျာ။ ဒါပေမယ့် မိဘနဲ့ တူတဲ့ နိုင်ငံတော် အစိုးရတွေအနေနဲ့ မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်တာတွေ မဖြစ်ရအောင် နောင် ဒီလိုပြစ်မှုတွေ ထပ်မံကျူးလွန်လို့ မရအောင်ဆိုပြီး နေအိမ်မှာ တားဆီးမိန့်တွေ ထုတ်ပြန်ထားရတာပါ" ဟု စစ်အစိုးရ မူဝါဒကို ထင်ဟပ်သည့် မြန်မာ့အလင်း နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာက ရေးသားထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိန်းသိမ်းထားမှု ယခုဆိုလျှင် ဆက်တိုက် ခြောက်နှစ်ထဲ ၀င်လာခြင်းအပေါ် စစ်အစိုးရက ခုခံပြောဆိုရာတွင် အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့ အပါအ၀င် နိုင်ငံအချို့တွင် ကျင့်သုံးသော အကြမ်းဖက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး ဥပဒေများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ ရေးသားထားသည်။မလေးရှား၊ စင်္ကပူ၊ အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိန်တို့ရှိ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေး ဥပဒေများနှင့် အကြမ်းဖက်မှု ကာကွယ် ဆန့်ကျင်ရေး ဥပဒေများကို ဖော်ပြသွားပြီး " နိုင်ငံတော်အား နှောက်ယှက် ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဥပဒေကို ပြဌာန်းတာဟာ မြန်မာနိုင်ငံ တခုတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ " ဟု ရေးသားထားသည်။
"မိမိနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေအရ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ဖို့၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ဖို့၊ လိုအပ်လာရင် ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို ဒီလိုပဲ ပြဌာန်းကြရတာပါပဲ" ဟု သတင်းစာက ရေးသားထားသည်။ စစ်အစိုးရက နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများကို ထိန်းချုပ်ထားပြီး သူတို့၏ ၀ါဒဖြန့်ချီမှုအတွက် ကိရိယာတခု အနေဖြင့် အသုံးပြုသည်။
သို့သော် ဝေဖန်သူများနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံသူများကမူ စစ်အစိုးရ၏ လက်ရှိ ဖိနှိပ်မှု ပြင်းထန်သော ဥပဒေအရပင်မူ သူမကို ၅ နှစ်ဆက်တိုက်သာ ချုပ်နှောင်ထားခွင့် ရှိသည်ဟု ပြောသည်။ ထိုအတိုင်းသာဆိုလျှင် သူမကို တရားရုံး မတင်ဘဲ ချုပ်နှောင်ခွင့်မှာ ပျက်ပြယ် သွားပြီ ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥပဒေ အကြံပေးအဖြစ် မိသားစုက ခန့်အပ်ခြင်းခံရသူ အမေရိကန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် ဥပဒေ အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ "Freedom Now" မှ ဂျားရတ် ဂျန်ဆာက အစိုးရ၏ ၁၉၇၅ ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကို ခြိမ်းခြောက်လျှင် လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးကို တနှစ်တခါ သက်တမ်းတိုးကာ ဆက်တိုက် ၅ နှစ်သာ ချုပ်နှောင်ထားနိုင်သည်ဟု ပြောသည်။
၁၉၇၅ ခုနှစ် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၀ (ခ) အရ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးနှင့် အချုပ်အခြာ အာဏာကို ထိပါး ခြိမ်းခြောက်လျှင် ထိုသူကို တနှစ်တခါ သက်တမ်းတိုးကာ ဆက်တိုက် ၅ နှစ်အထိ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
သို့သော် ဗုဒဟူးနေ့က စစ်အစိုးရ၏ ပြောကြားချက်တွင်မူ ထိုအခြေခံ ဥပဒေကိုပင် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုမှု မတူ ကွဲပြားနေသည်။
"နိုင်ငံသား တဦးဦးသည် နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာ အာဏာနှင့် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကို ဖြစ်စေ၊ အများပြည်သူတို့၏ အေးချမ်း သာယာရေးကို ဖြစ်စေ ထိပါးအန္တရာယ် ဖြစ်စေမည့် ပြုလုပ်မှုတခုခု ပြုလုပ်ခဲ့သည် သို့မဟုတ် ပြုလုပ်နေသည် သို့မဟုတ် ပြုလုပ်တော့မည်ဟု ယုံကြည် လောက်သော အကြောင်းရှိလျှင် ၀န်ကြီးအဖွဲ့သည် ယင်းပုဂ္ဂိုလ်၏ မူလ အခွင့်အရေး တရပ်ကို လိုအပ်သလို ကန့်သတ် ချမှတ်နိုင်သည်။" ဟု သတင်းစာက ရေးသားထားသည်။
ဖွဲ့ စည်းပုံဆန္ဒခံယူပွဲကိုဝေဖန်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အစီရင်ခံစာကို အမေရိကန်ထောက်ခံ
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ မကြာခင်ကပဲ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်သစ် မစ္စတာ ကင်တာနားက ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီကို ပထမဆုံးအစီရင်ခံစာ တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ အရေးကြီးတဲ့ အထောက်အထားတွေကို ဖော်ပြထားတာကြောင့် ဇွန်လ ၁၀ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ထုတ်တဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန ကြေညာချက်မှာ ပြောခွင့်ရသူ ရှောင်မက်ကောမက်က ဒီ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ အစီရင်ခံစာကို ထောက်ခံ ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစီရင်ခံစာထဲမှာ ဖော်ပြထားသလို - မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိမိ သဘောထား အမြင်တွေကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုဖို့ ခက်ခဲတာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ရလဒ်ကိုလည်း လက်ခံ ယုံကြည်ဖို့ ခက်တယ်လို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ပြောလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောခွင့်ရသူရဲ့ ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန အရာရှိတဦးက အခုလို ဖတ်ပြပါတယ်။
“ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ မကြာခင်က အစီရင်ခံစာထဲမှာ မြန်မာအစိုးရရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်း လူထုဆန္ဒ ခံယူပွဲအပေါ် လက်ခံ ယုံကြည် စိတ်ချရဖို့ အလှမ်းဝေးတယ်ဆိုတဲ့ နိဂုံးချုပ်ချက်အပေါ်မှာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကလည်း သဘောတူညီ ပါတယ်။ ကြည့်မယ်ဆိုရင် အခုအချိန်အထိ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ဆက်ပြီး ဖမ်းဆီးထားတဲ့ကိစ္စဟာ အတော့်ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာ အစိုးရအနေနဲ့ လူမျိုး ဘာသာမခွဲခြားပဲ အခြေခံ လူအခွင့်အရေးတွေကို လေးစားလိုက်နာဖို့နဲ့ နာဂစ် ဆိုက်ကလုံး မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေကို နိုင်ငံတကာက အကူအညီပေးဖို့ ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာလည်း လက်ခံဖို့ဆိုတာတွေ ပါပါတယ်။”
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်ကတော့ ဒီဆန္ဒခံယူပွဲဟာ ဘယ်လောက်အထိ ဒီမိုကရေစီ စံချိန်စံညွန်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီသလဲဆိုတာကို မြန်မာ အစိုးရအနေနဲ့ ရှင်းချက်ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ တောင်းဆို ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ အစိုးရဖက်ကတော့ ဒါဟာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့မဆိုင်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေး ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့သာ တုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ တဆက်တည်းပါပဲ ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာတော့ မကြာခင်က ဆိုက်ကလုံး မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေကို နိုင်ငံတကာ အကူအညီ ပေးရေးကိစ္စတွေ နှောင့်နှေး ရတာတွေကိုလည်း လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတရပ်အနေနဲ့ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်း မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာကို ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း အကူအညီ ပေးရေး လုပ်သားတွေကို အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေဖို့ ထပ်မံ တိုက်တွန်းလိုက်ပြန်ပါတယ်။
“အမေရိကန် အစိုးရအနေနဲ့ ဒီ ဒီကပ်ဘေး အကျပ်အတည်းက ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီသွားဖို့ ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာက လူသားချင်း စာနာကူညီရေးဝန်ထမ်းတွေ ဘာအနှောက်အယှက်မှ မရှိပဲ ဆိုက်ကလုံးသင့် ဒေသတွေကို သွားနိုင်မယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှုးချုပ် ဘန်ကီမွန်းကို ပေးထားတဲ့ ကတိက၀တ်ကိုလည်း လေးစားလိုက်နာဖို့ မြန်မာ အစိုးရကို တိုက်တွန်းပါတယ်။
မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်တွေကို အတင်းအကြပ်နေရပ်ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတာတွေ၊ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အထောက်အပံ့အကူအညီ လုံလုံလောက်လောက် မရှိတာတွေတွေအတွက် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အနေနဲ့ စိုးရိမ်မိပါတယ်။”
တချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး အဖြေရှာရေးကိုလည်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ ဆက်ပြီး တွန်းအားပေးသွားမယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေး ဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ အားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် ဒီမိုကရေစီနဲ့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုတွေ စတင်ဖို့ မြန်မာ စစ်အစိုးရကို အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက ဆက်ပြီး တွန်းအားပေးနေပါတယ်။”
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောခွင့်ရသူ ထုတ်ပြန်ချက်ကို နိုင်ငံခြားရေးဌာန အရာရှိတဦး ဖတ်ပြခဲ့တာပါ။
လေဘေး အကူအညီအတွက် တံခါးဖွင့်ထားရန် သခင်သိန်းဖေ ပန်ကြား
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 12 2008 14:44 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ စစ်အစိုးရအနေဖြင့် လေဘေး ဒုက္ခသည်များထံ အကူအညီ အလုံအလောက် ရရှိရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အကူအညီ များကို ခွင့်ပြု လက်ခံရန် သက်ရှိထင်ရှား လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင် ရဲဘော်ဟောင်းကြီးက ယနေ့ တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
မုန်တိုင်းကျပြီး တလကျော်ကြာ ယခုထိ ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသမှ လေဘေး ဒုက္ခသည်များထံ အကူအညီများ မရောက်ရှိဟူသော သတင်းစကား များ ကြားရပြီးနောက် အသက် ၉၂ နှစ်ပြည့်သွားပြီ ဖြစ်သည့် သခင်သိန်းဖေက ယခုလို ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“အစိုးရအနေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ လုပ်ဆောင်ပေးနေပေမယ့် လုံလောက်မှု မရှိတာ ကြားနေရတယ်။ သမာရိုးကျ အတင်းအကျပ် တံခါးပိတ် ထားတာမျိုး မလုပ်ဘဲနဲ့ နိုင်ငံထဲကို ဝင်ရောက်ပြီး ဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ကိုယ့်တိုင်းသူပြည်သားတွေကို ထိထိရောက်ရောက် အကူအညီ ပေးနိုင်ရေးကို ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့ နေအိမ်တွင် ပြုလုပ်သည့် သူ၏ မွေးနေ့ အခမ်းအနားတွင် သခင်သိန်းဖေက ပြောဆိုသွားသည်။
အခမ်းအနားသို့ သခင်လှကွန်း၊ သခင်လှမြင့်၊ သခင်သိန်းမောင်၊ သခင်ချန်ထွန်း စသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သခင်ဟောင်းကြီးများ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် ဦးစိုးမြင့်၊ ဦးညွန့်ဝေ၊ ဦးမြင့်သိန်း နှင့် ဦးသုဝေ၊ ဦးဝင်းနိုင် အပါအဝင် ထင်ရှားသော နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ဧည့်ပရိသတ် ၁ဝဝ ခန့် တက်ရောက်ကြသည်။
ဝါရင့် နိုင်ငံရေးသမားကြီးက မြန်မာပြည်၏ လက်ရှိ အခြေအနေ အရပ်ရပ်သည် လွတ်လပ်ရေးမရခင် အချိန်ကထက်ပင် ဖိနှိပ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှု များ ရှိနေပြီး လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲဝင်စဉ်က မျှော်မှန်းခဲ့သော လွတ်လပ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ အမျိုးသား သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး နှင့် တိုင်းပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ လုံးဝ ပျောက်ကွယ်နေသည်ဟု ဝေဖန်သည်။
လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် မေလ ၂၂ ရက်နေ့ကလည်း လေမုန်တိုင်းအလွန် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်များတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဆူနာမီ အတွေ့အကြုံကို နမူနာယူရန် စစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းခဲ့သေးသည်။ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ် ဆူနာမီ ဖြစ်စဉ်က အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး ပြဿနာများ ရှိနေသော်လည်း နိုင်ငံတကာမှ အကူအညီ ပေးသူများကို အတားအဆီးမရှိ လွတ်လပ်စွာ ကူညီခွင့်ပေးခဲ့သည့် နမူနာကို ရယူရန် ထောက်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သခင်သခင်ချန်ထွန်း (၈၇ နှစ်) က စစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ သဘောထား ပျော့ပြောင်းမည့် အချိန်ကို ဆုတောင်းနေရသည်ဟု ပြောသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် နိုင်ငံရေးသမားကြီးများ၏ တိုက်တွန်းချက်ကို စစ်အစိုးရက အလေးဂရုပြုသည့် လက္ခဏာ ပြသမှု မရှိပေ။
“ကျနော်တို့ အနေနဲ့က ကျနော်တို့ ထုတ်သမျှတွေ၊ တိုက်ရိုက်ပေးစာတွေ အကုန်လုံးကို အရောက်ပို့ပေးပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကလည်း တိုက်တွန်း၊ ကျနော်တို့ကလည်း တိုက်တွန်း၊ အားလုံးက တိုက်တွန်းနေမှာပဲ။ လက်ရှိ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေ အနေနဲ့ သူတို့က ဘယ်သူမှ၊ ဘာမှ ဂရုစိုက်ဘူး၊ လုပ်ချင်ရာ လုပ်မယ်ဆိုပြီး လုပ်နေတာ၊ မြင်နေတာပဲ။ ဘယ်တော့ ပျော့ပြောင်းလာမယ် ဆိုတာတော့ ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့် နေရတာပါပဲ။ သဘောထားတွေ ပြောင်းပါစေတော့လို့ ဆုတောင်းနေရတာပဲ” ဟု သခင်ချန်ထွန်းက ပြောသည်။
ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်သော စစ်အစိုးရ အာဘော် သတင်းစာတွင် ယခုအချိန်တွင် ပြည်ပမှ ဝင်ရောက်လာပြီး လေဘေးသင့် ဒေသများတွင် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူပေါင်း ၅၆၉ ဦး ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ သူတို့တွင် ကုလသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့များနှင့် တသီးပုဂ္ဂလများ ပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။
လူပေါင်း ၁ သိန်း ၃ သောင်းကျော် အသေအပျောက် ရှိခဲ့သော မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အနည်းဆုံး ၆ လကြာ အချိန်ယူ ရမည်ဟု ကုလသမဂ္ဂက တွက်ဆထားသော်လည်း စစ်အစိုးက မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တွင် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ပြီးဆုံးကာ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ စတင်နေပြီဟု ဆိုသည်။
ဤအတောအတွင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ် အစွန်အဖျား ဒေသသို့ ရှေ့ပြေး ရောက်သွားသော သုံးပွင့်ဆိုင် ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့က ဒေသတွင်း၌ အကူအညီများ လိုအပ်နေသည်ဟု ပြောသည်။ ကုလသမဂ္ဂ၊ အာဆီယံနှင့် မြန်မာတို့ ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် ယခုအခါ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၏ နောက်ဆုံး အခြေအနေကို ကွင်းဆင်းကာ အချက်အလက် စုဆောင်းနေဆဲ ဖြစ်သည်။
ဗီဒီယို ကင်မရာများ လိုက်လံ သိမ်းဆည်းနေ
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 12 2008 17:34 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ နာဂစ် မုန်တိုင်းဒဏ် ခံရသည့် ရန်ကုန်တိုင်း ကွမ်းခြံကုန်းမြို့တွင် အာဏာပိုင်များက ဗီဒီယိုနှင့် ရုပ်သေ ကင်မရာ ၁ဝ လုံးထက်မနည်း သိမ်းဆည်းထားသည်။
စစ်အစိုးရ သတင်းစာမှ စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်သူများနှင့် ကိုယ်ကျိုးရှာ အတ္တသမားများက လေဘေး ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကြံသတင်းများ ဖန်တီးလျက် ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယို ရိုက်ကူးပြီး ပြည်ပ သတင်းဌာနများသို့ ပေးပို့ကာ ကိုယ်ကျိူးရှာနေကြကြောင်း ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက် သိမ်းဆည်းမှု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
“ကွမ်းခြံကုန်းမှာ သိမ်းတာ။ ဒီဂျစ်တယ် ဗီဒီယို ကင်မရာ ၄ လုံးနဲ့ တခြား အိမ်သုံးကင်မရာ စုစုပေါင်း ၁ဝ ခုထက် မနည်းတော့ဘူး။ ဒီအပတ် ထဲမှာလည်း အိမ်တွေကို လိုက်ပြီးတော့ ကင်မရာတွေ သိမ်းနေတာ” ဟု ကွမ်းခြံကုန်းမှ ပြန်ရောက်လာသူ မဇ္ဈိမ သတင်းထောက်တဦးက ပြောသည်။
အလှူ မင်္ဂလာဆောင် မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယို ရိုက်ကူးသူ အများစုထံနှင့် ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးရေး ဆိုင်ငယ်များ ဖွင့်ထားသူများ ထံမှ ခေတ္တခဏဟု ပြောကာ ယူငင်သွားသော်လည်း ယခုအချိန်အထိ ပြန်ပေးခြင်း မရှိသေးကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
ယခုလဆန်း ၄ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် အာဏာပိုင်များက နာဂစ် မုန်တိုင်းဒဏ် ခံနေရသည့် ဒုက္ခသည်များအား ကူညီပေးနေသည့် ရုပ်ရှင်လောကမှ နာမည်ကျော် အနုပညာရှင် ဟာသ သရုပ်ဆောင် ကိုဇာဂနာကို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ကိုဇာဂနာ ခေါ် ကိုသူရ၏ အိပ်ခန်းရှိ နာဂစ် ဗီစီဒီခွေများ၊ နာဂစ်မုန်တိုင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကလေးသူငယ်များ သီဆိုထားသည့် သီချင်းခွေများပါ သိမ်းဆည်းသွားသည်။
မေလ ၂-၃ ရက်နေ့များအတွင်းက တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်း မြို့နယ်အချို့နှင့် ဧရာဝတီတိုင်း မြို့နယ်များရှိ လူများ သေကြေပျက်စီးပုံ၊ လမ်း၊ သစ်ပင်များ၊ လူနေအိမ်ခြေများ ပျက်စီး ပြိုလဲမှုများကို မှတ်တမ်း တင်ထားသော ဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယိုခွေ၊ ဗီစီဒီခွေများကို အရောင်းတွင်ကျယ် လူကြိုက်များခဲ့သည်။
အသက်မသေ ကျန်ခဲ့သူ ကလေးအများ စိတ်ဒဏ်ရာရနေ
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 12 2008 11:50 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ မိဘဆွေမျိုးများ သေဆုံး ကုန်ကြသည်ကို တွေ့ပြီးနောက် နာဂစ် ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်း ဘေးမှ အသက်မသေ လွတ်မြောက် လာခဲ့သူ ကလေးသူငယ် အများအပြားသည် စိတ်ဒဏ်ရာ ရနေကြသည်ဟု ကလေးများအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးနေသော နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရေး အေဂျင်စီတခုက ပြောကြားလိုက်သည်။
ထိုအသက်မသေ လွတ်မြောက်ခဲ့သူများထဲတွင် ကလေးသူငယ်များသည် အားအနွဲ့ဆုံး အုပ်စုဖြစ်ပြီး သူတို့ကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ထိခိုက်စေခဲ့သော စိတ်ဒဏ်ရာများမှ လွတ်မြောက်ရန် လုံးပန်းနေရဆဲ ဖြစ်ကြသည် ဟု ဘန်ကောက်ရှိ World Vision ဒေသဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးရုံး ဒါရိုက်တာ James East က ပြောကြားသွားပါသည်။
“ကလေး တော်တော်များများ စိတ်ဒဏ်ရာ၊ စိတ်သောက ဝေဒနာ ခံစားနေကြရတယ်” ဟု East က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် မဇ္ဈိမသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
World Vision, UNICEF, Save the Childred အဖွဲ့များ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း (အိုင်အန်ဂျီအို) ၁ဝ ခုကျော်သည် အဆိုပါ ကလေးငယ်များကို အကူအညီပေးရန် အလုပ်အဖွဲ့ တခုကို ဖွဲ့စည်းထားသည်ဟု ဆိုသည်။
“မုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရတဲ့ ဒေသတချို့မှာ ကလေးတွေ ကစားနိုင်တဲ့ နေရာလေးတွေ လုပ်ထားပါတယ်။ ဒါတွေဟာ “ကလေးများ နေပျော်ဘွယ် ဂေဟာ” (Child-friendly Spaces) လေးတွေပါ။ နေစရာ ဘုံပျောက်နေတဲ့ ကလေးတွေအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရပြီး အကာအကွယ် ပေးနိုင်မဲ့ ဝန်းကျင်တရပ်ကို ဖန်တီးပေးထားတာပါ” ဟု East က ပြောသွားပါသည်။
ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရသော ကလေးငယ် အရေအတွက်ကို မခန့်မှန်းနိုင်သေးသော်လည်း မိဘများ ပျောက်ဆုံးနေသည့် ကလေးငယ် အနည်းဆုံး ၂ဝဝဝ ကို ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ရှာဖွေ တွေ့ရှိထားသည်။ ဧရာဝတီတိုင်း ဘိုကလေးမြို့တွင် ထိုသို့ မိဘများ ပျောက်ဆုံးနေသူ ကလေးပေါင်း ၃၂ ဦးကို မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ဖြစ်သည်။
ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသသည် မုန်တိုင်းဒဏ်ကို အဆိုးဝါးဆုံး ခံခဲ့ရသော ဒေသဖြစ်သော်လည်း မိဘနှင့် လူကြီးအစောင့်အရှောက် မပါသည့် ကလေးငယ် အရေအတွက်ကို အတည်ပြုဘို့ လိုသေးသည်ဟု ကမ္ဘာ့ကလေးများ ရံပုံငွေအဖွဲ့ (UNICEF) က ပြောကြားလိုက်ပါသည်။
သူတို့ ဖွဲ့စည်းထားသော အလုပ်အဖွဲ့သည် သူတို့ မိသားစုနှင့် ပြန်လည် ဆုံစည်းနိုင်ရန် ခြေရာခံ ရှာဖွေပေးမည့် အဖွဲ့ဖြစ်သည်ဟု ဘန်ကောက်ရှိ (UNICEF) အရှေ့အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာရုံး ကလေးငယ် ကာကွယ်ရေး အရာရှိ အလက်ဇန်းဒါး ကရူးဂါး (Alexander Krueger) က ပြောဆိုပါသည်။
“ဒီလို သူတို့ မိဘဆွေမျိုးတွေကို လိုက်ရှာပေးတဲ့အလုပ် မပြီးမချင်း မိဘမဲ့ကလေး ဘယ်လောက်ရှိတယ် ဆိုတာ ပြောဘို့ ခက်ပါတယ်” ဟု Krueger က ပြောသွားပါသည်။
သို့သော် မိဘများနှင့် ကွဲကွာနေသူ ကလေးပေါင်း ရာဂဏန်း အချို့ရှိပြီး လူကြီးနှင့် ဆွေမျိုး အစောင့်အရှောက် မပါသည့် ကလေးငယ်ပေါင်းက ၁ဝဝ ခန့်ရှိသည်ဟု သူက ဆိုပါသည်။
ကလေးငယ်များနှင့် အရွယ်မရောက်သေးသူများ လမ်းများပေါ် ထွက်၍ တောင်းစားနေသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်ဟု မုန်တိုင်းဘေးမှ အသက်မသေ လွတ်မြောက်ခဲ့သူများကို ကူညီ စောင့်ရှောက်ပေးနေသည့် မြန်မာလူမျိုး အကူအညီပေးရေး လုပ်သားများနှင့် စေတနာ့ ဝန်ထမ်းများက ပြောပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သော ကလေးအများစုမှာ “ခံစားချက်မဲ့သည့်” မျက်နှာများဖြင့် ငူငူငိုင်ငိုင်ကြီး ထိုင်နေကြပြီး၊ ယင်းမှာ စိတ်ခြောက်ခြားမှု ဝေဒနာ စိတ်ဒဏ်ရာ ရနေသည့် လက္ခဏာ ဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရေး အေဂျင်စီ တခုနှင့် အလုပ် တွဲလုပ်နေသည့် မြန်မာ အကူအညီပေးရေး လုပ်သားတဦးက ပြောပါသည်။
“ကလေးတချို့ကတော့ သူတို့ မိဘတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်မှန်း မသိလို့ လိုက်ရှာနေကြတာ၊ တချို့ကတော့ သူတို့ မိဘတွေ ရေနစ်သေကုန်ပြီလို့ ပြောတယ်” ဟု ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသတွင် မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်များကို အကူအညီ ပေးနေသည့် အကူအညီပေးရေး လုပ်သားတဦးက မဇ္ဈိမ သတင်းဌာနကို လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ယာယီ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းအနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့သော ကလေးများအတွက် “ကလေးများ နေပျော်ဘွယ် ဂေဟာ” များကို သူတို့ အလုပ်အဖွဲ့က တည်ဆောက်ပေးထားကြောင်း၊ ထိုဂေဟာများတွင် ကလေးများကို ကျွေးမွေး စောင့်ရှောက်ထားကြောင်း၊ ဆော့ကစားနိုင်ကြောင်း၊ စာသင်ကြား လေ့လာနိုင်ကြောင်း၊ သူတို့မိဘများ ဒုက္ခ သုခများမှ လွတ်မြောက်ကြောင်း ရှာဖွေ ရုန်းကန်နေရချိန်တွင် ထိုသို့ကလေးများ သောကမဲ့ နေနိုင်ရေး စီစဉ်ပေးထားကြောင်းလည်း East က ပြောသွားပါသည်။
“ဧရာဝတီတိုင်းနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ဒီလို “ကလေးများ နေပျော်ဘွယ်ဂေဟာ” လေးတွေ ၄၄ ခုလောက် တည်ဆောက် ပေးထားပါတယ်၊ ဒီနေရာတွေမှာ နေပြီး ကစားလို့ ရတယ်၊ သူတို့ရဲ့ အတိတ် အိပ်မက်ဆိုးတွေကို မေ့ပျောက်အောင် ကြိုးစားလို့ရတယ်” ဟု East က ဆိုပါသည်။
မြန်မာ စစ်အစိုးရ အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်း ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည့် ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသသို့ မေလ အတွင်းက လာရောက် စစ်ဆေးကြည့်ရှုခဲ့စဉ် ကလေးများအတွက် မိဘမဲ့ ဂေဟာများ တည်ဆောက်ပေးရန် ဒေသခံ အာဏာပိုင်များကို လမ်းညွှန် မှာကြားသွားခဲ့သည်။ ထိုကလေးများသည် ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ဖျာပုံနှင့် လပွတ္တာ မြို့နယ်များအတွင်း ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်စဉ် သူတို့၏ မိဘများကို ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသူများ ဖြစ်သည်။
သို့သော် အဆိုပါ ကလေးများကို မိဘမဲ့ ဂေဟာများတွင် ထားရှိခြင်းသည် အကောင်းဆုံး အဖြေတခု မဟုတ်ကြောင်း အကူအညီပေးရေး အေဂျင်စီများက ပြောဆိုကြပါသည်။ သူတို့ကို မွေးစားလိုသည့် မွေးစားမိဘများ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများ အကြား၌ နေခြင်းကသာလျှင် ကလေးများအတွက် ပိုမို ရင်းနှီးနွေးထွေးသည့် ဝန်းကျင်ကောင်း တခုကို ရရှိစေမှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သူတို့က ထောက်ပြကြပါသည်။
“အစိုးရက မိဘမဲ့ကလေးတွေ၊ လူကြီးဆွေမျိုး အစောင့်အရှောက် မရှိတဲ့ကလေးတွေ အတွက် မိဘမဲ့ဂေဟာတွေ ဆောက်ဘို့ကို အဖွဲ့အစည်း ဆန်ဆန် အဆောက်အအုံ အနေနဲ့ကို စီစဉ်နေပါပြီ” ဟု UNICEF အဖွဲ့မှ Krueger က ပြောသွားပါသည်။
ဤသို့ တည်ဆောက်ခြင်းသည် ယာယီ အခြေအနေတရပ် အတွက်သာ ဖြစ်သင့်ကြောင်း၊ ထိုသို့ဖြစ်မှသာ ကလေးများ အနေဖြင့် လက်ခံနိုင်ဘွယ် ရှိမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့ ဆွေမျိုးသားချင်းများ၊ သူတို့ သိကျွမ်းသူ လူကြီးအသိအကျွမ်းများကို ဘယ်လိုမှ ရှာဖွေ မတွေ့ရှိနိုင်မှသာ ဤသို့ ကလေးများအတွက် အဖွဲ့အစည်းဆန်ဆန် အတည်တကျ ထူထောင်ခြင်းကို နောက်ဆုံး နည်းလမ်းအနေဖြင့်သာ လုပ်ဆောင်သင့်သည်ဟု UNICEF က သဘောရသည်ဟုလည်း Krueger က ပြောသွားပါသည်။
“မိသားစု အခြေခံတဲ့ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေဘို့ ကျနော်တို့ မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်း ပြောဆိုနေပါတယ်” ဟု Krueger က ဆက်လက် ပြောဆိုသွားပါသည်။
မြန်မာလူထုသည် မိသားစုကြီးကြီး၊ ဆွေမျိုး အသိုင်းအဝိုင်းများ တအိမ်တည်း စုပေါင်းနေထိုင်သည့် အလေ့ရှိခြင်းကြောင့် ထိုဆွေမျိုး အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပြန်လည် ဆက်သွယ်ပေးပြီး နေထိုင်စေခြင်းသာ မုန်တိုင်းအတွင်း မိဘများ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် ကလေးများကို ကူညီနိုင်သည့် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနည်း ဖြစ်သည် ဟု East က ပြောပါသည်။
မေ ၂ ရက်နှင့် ၃ ရက်နေ့များက မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်အပြီး ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်များကို ချက်ချင်း သွားရောက် အကူအညီ ပေးခဲ့သည့် Save the Children အဖွဲ့ကမူ ကလေးများကို ကျောင်းများတွင် ထားရှိခြင်းသည်သာ အလုံခြုံဆုံး ဖြစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုနေရာတွင်သာ ကလေးများ အနေဖြင့် သူတို့ သူငယ်ချင်းများနှင့် ရောနှောနေထိုင်ပြီး အတိတ်ဆိုးများကို မေ့ပျောက်စေနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား သွားပါသည်။
“ပညာရေးက အရေးကြီးတယ်၊ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေအပြီး သူတို့ မိသားစုတွေ ကလေးတွေအတွက် ပုံမှန်ဘဝ ရောက်ဘို့ ပြန်လည် တည်ဆောက်ရာမှာ ပိုလို့တောင် အရေးကြီးလာဦးမယ်” ဟု Save the Children အဖွဲ့၏ မြန်မာနိုင်ငံ ဒါရိုက်တာ အင်ဒရူး ကတ်ခ်ဝုဒ် (Andrew Kirkwood) က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
“ကလေးတွေအတွက် ကျောင်းတွေသာ လုံခြုံ စိတ်ချရတဲ့နေရာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီမှာသာ အခြား ကလေးတွေနဲ့ ရောနှော နေထိုင်ပြီး ဆော့ကစား နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်၊ သူတို့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ စိတ်ခြောက်ခြားမှု စိတ်သောကတွေကို စတင် ကုစားနိုင်မဲ့ နေရာလဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု Kirkwood က ဆိုလိုက်ပါသည်။
ကယ်ဆယ်ထောက်ပံ့ရေး လုပ်နေသည့် နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုများသို့ စစ်အစိုးရ၏ စည်းကမ်းချက်များ
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 12 2008 14:51 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ် သင့်သူများကို အကူအညီပေးနေသည့် နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအိုများ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် ကန့်သတ်ချက်များကို အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀န်ကြီး ဦးစိုးသာက ရန်ကုန်မြို့ မော်ကွန်းတိုက် ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် ဇွန် ၁၁ ရက်၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်သော အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားသွားသည်။
(၁) အကူအညီပေးသည့် နိုင်ငံ၊ အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းစာရင်း၊ တန်ဖိုး၊ လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ စာရင်းဇယားများ ပေးပို့ရမည်။
(၂) လှူဒါန်းသည့်အခါ လေဘေးသင့်သူများ အမှန်တကယ် လိုအပ်မည့် ပစ္စည်းများ ဖြစ်ရမည်။ အသုံးမတည့်သည့် ပစ္စည်း၊ သုံးလေ့သုံးထ မရှိသည့် ပစ္စည်းမျိုး ဖြစ်နေ၍ ပြန်လည် ရောင်းချပါက အကျင့်ပျက်သွားနိုင်၊ နိ်ုင်ငံဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်မှု အဖြစ်မခံနိုင်။
(၃) မုန်တိုင်းနှင့် ပတ်သက်သည့်အကူအညီပေးမည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် အပြည့်အစုံကို သက်ဆိုင်ရာ Focal Ministry နှင့် မြန်မာ၊ အာဆီယံ၊ ကုလသမဂ္ဂ သုံးပွင့်ဆိုင် ဗဟိုကို ကြိုတင် အကြောင်းကြား ခွင့်ပြုချက် ရယူရမည်။
(၄) ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာ၍ ပစ္စည်းများ ထုတ်ယူရာတွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ Focal Ministry နှင့် သုံးပွင့်ဆိုင် ဗဟိုအဖွဲ့တို့၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ထုတ်ယူရမည်။
(၅) ပစ္စည်းများ သိုလှောင်ထားရှိမှုကို သက်ဆိုင်ရာ Focal Ministry နှင့် သုံးပွင့်ဆိုင် ဗဟိုသို့ အကြောင်းကြားရမည်။
(၆) ထောက်ပံ့ ပစ္စည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မည်သည့်ပစ္စည်း မည်သို့ပို့မည် ဆိုသည့် အစီအစဉ်ကိုလည်း Focal Ministry နှင့် သုံးပွင့်ဆိုင် ဗဟိုသို့ အကြောင်းကြားရမည်။
(၇) ဖြန့်ဝေမည့် မြို့နယ်တွင် ဖြန့်ဝေမည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစား၊ အရေအတွက်နှင့် တန်ဖိုးစာရင်းကို မြို့နယ် အာဏာပိုင်များသို့ ပေးပို့ရမည်။
(၈) မြို့နယ်အတွင်း ဖြန့်ဝေမှုတွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် အာဏာပိုင်များနှင့် ညိုနှိုင်းရမည်။
( ဇွန် ၁၁ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာကို ကိုးကားပါသည်။)
လေဘေးကယ်ဆယ်ရေး သံဃာတော်တွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ခွင့်မရ
မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားသော ကျောက်တန်းမြို့နယ်ရှိ စေတီနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ရှင်းလင်းနေသော သံဃာတော်တပါး။ မေ ၈၊ ၂၀၀၈။(ဓာတ်ပုံ-အေပီ)
လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးအတွက် အစိုးရ လက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေ
အပေါ် စစ်အစိုးရက လမ်းညွှန်ချက်တွေ ထုတ်ပြန်နေတဲ့ တချိန်တည်းမှာ ပြည်တွင်းက ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့ သံဃာတော်တွေ
အတွက်လည်း သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့နဲ့ အာဏာပိုင်တွေဘက်က ကန့်သတ်မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ ပြည်တွင်းက သံဃာတော်
တွေက မိန့်ကြားပါတယ်။ မြင်းခြံမြို့မှာ လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ သံဃာတော်တပါးက ဒီလို
ကန့်သတ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိန့်ကြားခဲ့တာကို မညိုညိုလွင်က စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
“သဘောတခုက အလှူခံတယ်၊ စသည်အားဖြင့် လုပ်လို့ရှိရင် သံဃာ့နာယကမှာ အလှူခံခွင့်ပါမစ် တောင်းရတယ်။ အဲလိုတောင်းတဲ့အခါ သူတို့က ပါမစ်ပေးမယ်။ ဦးဇင်းတို့အလှူခံတဲ့ဟာကို အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးလှူပါဆိုရင် ဦးဇင်းတို့က မလှူနိုင်ဘူး။ မလှူနိုင်တဲ့အတွက် ဦးဇင်းတို့က မြန်မာပြည်မှာ ထင်ရှားတဲ့ သီတဂူဆရာတော်ကြီးနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး မြင်းခြံသီတဂူ အဖွဲ့ခွဲအနေနဲ့ဝါသနာတ
ူရာ လူငယ်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီး မြင်းခြံအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။”သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့က ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဆောင်နေတဲ့ သံဃာတော်တွေကို အခုလို ကန့်သတ်မှုတွေ လုပ်ဆောင်နေပေမယ့် ဦးစီးဦးဆောင် ညွှန်ကြားပေးတာမျိုးတော့ မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
“နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယကအနေနဲ့လည်း နာဂစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာမှညွှန်ကြားချက်မပေးသလို နာဂစ်ကူညီရေးအတွက်ကိုလည်း လုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေ လုံးဝမရှိပါဘူး။”ဆရာတော်အနေနဲ့ လေဘေးဒဏ် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံခဲ့ရတဲ့
ဟိုင်းကြီးကျွန်းကို ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိန့်ကြားတာကတော့ …“ဟိုင်းကြီး မဲသရဲရွာကိုသွားတယ်။ မဲသရဲရွာကို ဦးဇင်းအနေနဲ့ သီတဂူအဖွဲ့ခွဲနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သံဃာတော်များက ပံ့ပိုးပေးလိုက်တဲ့ အ၀တ်အထည်များကို ဦးဇင်းတို့က ကျေးရွာရော၊ ကျေးရွာ ဆားကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ အိမ်ခြေ ၂၇၀ ကို တအိမ်ထောင်ကို အ၀တ်အထည် ၁၀ ထည်နှုန်းလောက်နဲ့ ဝေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
“အဲလိုဝေတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ တလရှိတဲ့အတိုင်းအတာကို နိုင်ငံတော်ရဲ့ အထောက်အပံ့ ဘယ်လောက်ရသလဲလို့ ဦးဇင်းမေးကြည့်ပါတယ်။ မေးကြည့်တဲ့အခါ အဲဒီရွာက ပုဂ္ဂိုလ်များက ဆန် ၆ ပြည်၊ ဆီ ၅ ကျပ်သား မပြည့်တပြည့်၊ အာလူး ၅ လုံး၊ ကြက်သွန် ၇ လုံး၊
ဒါပဲရတယ်လို့ ပြောပါတယ်၊ စားသောက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်လို့။ “အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ လောလောဆယ် ဆောက်နေဆဲ အိမ်တွေကိုပဲ တပိဿာနဲ့ သုံးဆယ်သားပေးတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မဲသရဲရွာရဲ့ ဆရာတော်ကြီးက အသက် ၉၀ နား နီးနေပါပြီ။ ကျောင်းတွေက နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် အကုန်လုံး အမိုးတွေမရှိတော့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဆရာတော်ကြီးက ရွာထဲမှာသွားပြီး သီတင်း သုံးနေပါတယ်။“ပထမတုန်းကတော့ တက်လမ်းကုမ္ပဏီက ဒီကျောင်းတွေကို ပြင်ပေးမယ်လို့ ဦးဇင်း
ရှေ့မှာ လာလျှောက်ပေမယ့် ဦးဇင်း ဒီကိုပြန်ရောက်ပြီး မေးကြည့်တဲ့အခါ ဒီကုမ္ပဏီတွေက ဆက်ပြီးမလုပ်တော့ဘူးလို့ ပြောတဲ့အတွက် ဒီကျောင်းတော်ကြီးတွေ ပြင်ဖို့ရာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရွာက နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရတဲ့ လုပ်သားပြည်သူများက ၀ိုင်းပြီး
တော့ပဲ ဆောက်ပေးရမယ့်ပုံစံ ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့နေရေးထိုင်ရေးကလည်း
မန်မာနိုင်ငံက သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့အနေနဲ့ အခုလို သံဃာတော်တွေရဲ့အကျိုး၊ ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုး ဆောင်ရွက်တာတွေ မရှိတာကြောင့် ဖျက်သိမ်းပစ်လိုက်ရင် အကောင်းဆုံးပဲလို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းက ဆရာတော်တပါးက အခုလို
“အဲဒီအဖွဲ့အစည်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင် စက်တင်ဘာမှာတုန်းကလည်း နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယက အဖွဲ့အစည်းတွေက အာဏာရှင်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တုံဏှိဘာဝေ လုပ်လိုက်တယ်။ တုံဏှိဘာဝေ ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းဟာ ၀န်ခံလိုက်တဲ့သဘော
ပဲ။ ဒါ လုပ်ခိုင်းလိုက်တဲ့သဘောပဲ။ အဲဒါပြီးတော့ အခု နာဂစ်မုန်တိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယက အဖွဲ့အစည်းတွေ ငြိမ်နေတယ်။ ရပ်ကွက် သံဃာ့နာယက၊ တိုင်းသံဃာ့နာယက၊ မြို့နယ်သံဃာ့နာယက၊ စတဲ့ သာသနာနဲ့
ပတ်သက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက အားလုံးငြိမ်နေကြတယ်။“ဒီမှာ သာသနာရေး၊ ဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အောက်ပိုင်းမှာ တော်တော်လေး အတိဒုက္ခ ရောက်နေကြတယ်။ ဒါက မြန်မာနိုင်ငံမှမဟုတ်ဘူး၊ တကမ္ဘာလုံးသိနေတဲ့ကိစ္စကြီးကို အမိန့်မထုတ်၊ ဦးစီးဦးဆောင် မလုပ်ဘဲနဲ့ ဒီတိုင်းငြိမ်နေတယ်။ ဒီတော့ နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယက ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဥစ္စာကြီးက အလကားဖြစ်နေတယ်။ အဲလို အလကားဖြစ်နေတဲ့အတူတူကတော့ ဖျက်ပစ်လိုက်တာ ကောင်းလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းမှမလုပ်ဘဲနဲ့။”
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဆောင်နေတဲ့ သံဃာတော်တွေအပေါ် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့က ကန့်သတ်ပိတ်ပင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသက ဆရာတော်တွေ မိန့်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မိုးစပါးအတွက် အမတော်ကြေးများ ထုတ်ပေးမည်
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 12 2008 17:36 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ နာဂစ် မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် မြို့နယ်များတွင် မြန်မာလယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ မိုးစပါးအတွက် အမတော်ကြေး လယ်တဧကလျှင် ၈ ထောင်ကျပ်နှုန်း ထုတ်ချေးရန် စီစဉ်လျှက် ရှိသည်။
မြို့နယ်အလိုက် မြန်မာ့လယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ကျေးရွာတခုချင်း၏ ချေးငွေ စီစစ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌများကို ခေါ်ယူကာ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မိုးစပါး အတွက် ငွေချေးပုံစံ လျှောက်လွာများ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
၁ ဧက ၈ဝဝဝ နှုန်းနှင့် ၁ဝ ဧကအထိ ချေးပေးမည် ဖြစ်ကာ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း အတိုးပေးရမည့် ချေးငွေအတွက် ရယူလိုသော လယ်သမားသည် ဘဏ်၏ အသင်းဝင် ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားများနှင့် ကျေးရွာ ချေးငွေ စီစစ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ၏ ထောက်ခံစာများ တင်ပြရမည် ဟု ဘိုကလေးမြို့နယ်ရှိ မြန်မာလယ်ယာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ ဒုတိယ ကြီးကြပ်ရေးမှူးတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
နာဂစ် မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် မြို့နယ် လယ်ယာဘဏ်နှင့် နွေစပါးအတွက် အမတော်ကြေးငွေ ထုတ်ယူခဲ့သည့် လယ်သမားများ အခြေအတင် အငြင်းပွားနေရမှုများလည်း ရှိသည်။
ဖျာပုံမြို့နယ်တွင် ဘဏ်က လယ်သမားများထံမှ ချေးငွေ ပြန်ဆပ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ပြေစာ ပြသနိုင်မှသာ နောက်ထပ် ချေးငွေအသစ် ပေးမည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။
“ဘဏ်က ပြောတာကာ နာဂစ်ကြောင့် စာရွက်စာတမ်းတွေ ပျောက်သွားပြီတဲ့၊ အဲတော့ သူတို့မှာ စာရင်း မရှိတော့ဘူး။ လယ်သမားကပဲ ငွေဆပ် ပြီးတဲ့ စာပြရမယ်တဲ့။ လယ်သမားတွေလည်း နာဂစ်ကြောင့် အကုန်လုံး ဆုံးရှုံးမှတော့ စာရွက်စာတမ်းမရှိတဲ့ လူတွေက အများကြီး။ အဲဒီတော့ ဘဏ်က ချေးငွေသစ် ထုတ်မချေးပါဘူး လုပ်နေတယ်။” ဟု ဖျာပုံမြို့နယ်မှ တောင်သူကြီး တဦးက ပြောသည်။
ချေးထားသည့်ငွေများ ပြန်ဆပ်နိုင်ခြင်း မရှိသလို လယ်ယာ ဆက်လုပ်နိုင်ရန် ငွေကြေးလည်း မရှိခြင်းကြောင့် မျှော်လင့်ချက် မဲ့နေသည်ဟု လယ်သမားတဦးက ပြောသည်။
“လယ်လုပ်ငန်းကို ဆက်လုပ်ဖို့ အင်အားလည်း မရှိတော့ဘူး၊ မျှော်လင့်ချက် မဲ့နေတာ၊ ကျောချဖို့ တောင်မနည်း လုပ်နေရတယ်” ဟု မြင်းဂကုန်း ကျေးရွာမှ လယ်သမားတဦးက ပြောသည်။
အစိုးရဘဏ်က ထုတ်ချေးမှုမှာ ပမာဏ နည်းလွန်းလှသည်ဟုလည်း လယ်သမားများက ပြောသည်။
“ဘဏ်ကရတာ အရမ်းနည်းပါတယ်၊ ကုန်ကျစရိတ်ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း နည်းနည်းလေးပဲရတာ၊ မြို့ပေါ်က လုပ်ငန်းရှင်တွေဆီက ချေးပြီး လုပ်နေရတာ” ဟု မြင်းဂကုန်း ကျေးရွာရှိ လယ်သမားတဦးက ပြောသည်။ လယ်ဧက ၃ဝ ကျော်ပိုင်သော သူ၏ စပါးတင်း ၂ဝဝဝ ကျော် နာဂစ်ကြောင့် ရေစို ပျက်စီးသွားခဲ့သည်။
ထိုဒေသတွင် လယ် ၁ ဧကကို စိုက်ပျိုးရာတွင် ဓာတ်မြေသြဇာ အပါအဝင် ပျှမ်းမျှ ကုန်ကျစားရိတ်မှာ ကျပ် ၁ သိန်း ၈ သောင်း ဝန်းကျင် ဖြစ်သည်။ ငွေလိုသူ လယ်သမားများမှာ နီးစပ်ရာ ပုဂလိကများထံတွင် အတိုးနှုန်း အမြင့်နှင့် ချေးငှား လုပ်ဆောင်ရသည်ဟု လယ်သမားများက ပြောသည်။
ယခင် နွေစပါးအတွက် ချေးငွေနှုန်းထားမှာ တဧကလျှင် ၇ ထောင်ကျပ်နှုန်းဖြစ်ပြီး ၁ဝ ဧက အတွက် အများဆုံး ချေးငွေ ထုတ်ယူနိုင်သည်။
ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (FAO) က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် နာဂစ်ကြောင့် လယ်ဧကပေါင်း ၅ သိန်းကျော် ပျက်စီး သွားသည်ဟု ပြောသည်။
သို့သော် ယခု မိုးရာသီတွင် မုန်တိုင်းကြောင့် မစိုက်ပျိုးနိုင်သည့် လယ်ဧကမှာ တပြည်လုံး စပါးစိုက်ဧက၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်း မပြည့်ဟု စစ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ရောဂါဖြစ်မှုများသော်လည်း ကပ်ဘေးအဆင့် မဟုတ်ဟု MSF ပြော
ကြာသပတေးနေ့၊ ဇွန်လ 12 2008 18:58 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ချင်းမိုင်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ကလုံးဒဏ်ခံ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူများအကြား ၀မ်းရောဂါနှင့် အသက်ရူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ရှိနေသော်လည်း ကပ်ဘေးတခု အနေအထားအထိ ရောက်ရှိသည့် လက္ခဏာ မတွေ့ရသေးဟု ပြောလိုက်သည်။
"အဲဒီဒေသမှာ ၀မ်းပျက် ၀မ်းလျောဖြစ်တာ လူနာ ၅၀ ကျော် တွေ့ရတယ်" ဟိုင်းကြီးကျွန်းပေါ်တွင် အဖွဲ့နှင့်အတူ ဆေးကုသရေး လုပ်ကိုင်နေသူ မြန်မာ ဆရာဝန်တဦးက ဗုဒဟူးနေ့က မဇ္ဈိမသို့ ပြောသည်။
"ဒါပေမယ့် ရောဂါပြန့်ပွားမှုကို ကျနော်တို့ ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ရောဂါကပ်ဘေး အနေနဲ့ ပျံ့ပွားမယ့် အနေအထား မဟုတ်ပါဘူး" ဟု သူက ပြောသည်။
ဆရာဝန်နှင့် သူဆေးအဖွဲ့သည် မေ ၂ ရက်နေ့က မုန်တိုင်း တိုက်ခိုက်မှု ခံရသည့် ဟိုင်းကြီးကျွန်း ကျေးရွာအုပ်စုမှ ကျေးရွာ ၁၀၀ ကျော်ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုလို သုံးသပ်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။
လပွတ္တာမြို့တွင် ကိုယ်ပိုင် ဆေးခန်းတွင် ဆိုင်ကလုံး ဒုက္ခသည်များကို ဆေးကုသမှု ပေးနေသူ ဒေါက်တာအေးကြူက သူ၏ ဆေးခန်းသို့ နေစဉ် လူနာ ၂၅ ဦးခန့် ၀မ်းရောဂါနှင့် ပတ်သက်ပြီး လာရောက်ကုသမှု ခံယူလျှက် ရှိသည်ဟု ပြောသည်။
ဇွန် ၁၀ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်သော ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့၏ စစ်တမ်းအရ လူပေါင်း ၆၈၅ ယောက် အသက်ရူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာ ခံစားနေရပြီး ၀မ်းရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၁၁၇ ယောက်၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ဖြစ်ပွားသူ ၃ ဦး၊ အသည်းရောင်အသားဝါ ဖြစ်သူ ၄ ဦးတို့ကို ရန်ကုန်တိုင်း နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ပါရှိသည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီးကလည်း ကပ်ဘေးတခု အနေဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်း မပြုပေ။ ထို့အပြင် ဆေးဝါး အထောက်အပံ့များ ဝေးလံ ခေါင်ဖျား ဒေသများအထိ ပို့ဆောင်ရန် လုပ်ဆောင်ပြီး ဖြစ်သည်ဟုလည်း ပြောသည်။
သို့သော်လည်း ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများကို ကန့်သတ် တားမြစ်ခြင်း ခံရလျှင် ဆေးဝါးကုသမှု အကူအညီများ ချက်ခြင်း မရောက်နိုင်လျှင် လူအမြောက်အများ သေစေနိုင်သည့် "ဒုတိယမြောက် သေမင်းတမန် လှိုင်းလုံးကြီး" ဖြစ်သွားမည့် အန္တရာယ် ရှိသည်ဟုတော့ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီးက သတိပေးထားသည်။
အောင်ဇော်| ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၀၈
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက မုန်တိုင်းကပ်ဘေး ဆိုးကျိုးများကို အမှန်တကယ် လျစ်လျူရှုခဲ့ခြင်းလော၊ သို့မဟုတ် မြစ်ဝကျွန်း ပေါ်ဒေသရှိ ယခင်သူပုန်ဟောင်း ကရင်ရွာသားများကို အညှိုးအတေးဖြင့် စတေးခဲ့ခြင်းလော... သို့လော သို့လော တွေးဆဖွယ် ဖြစ်နေရသည်။
နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ခံရပြီး ရက်သတ္တ ၂ ပတ်ကြာသည့်အချိန်တွင်မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လျှို့ဝှက်သိပ်သည်းလွန်းလှ သည့် ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက နောက်ဆုံးတွင် လူထုရှေ့မှောက်သို့ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ သူက ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသောနေရာများရှိ ဟန်ပြဆောက်လုပ်ထားသည့် စခန်းများကို လှည့်လည် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးခဲ့သည်။
သိမီသမျှသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းတလျှောက် အဆိုးရွားအပြင်းထန်ဆုံးသော မုန်တိုင်းကြီး တိုက်ခတ်နေစဉ်နှင့် နောက်ပိုင်းကာလတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက လူမြင်ကွင်းမှ ပျောက်ကွယ်နေခဲ့သည်။ ကပ်ဘေးဒုက္ခအပေါ် မည်သို့မျှ တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်း မရှိခဲ့ပါ။ ဤသို့ပြုမူနေခဲ့ခြင်းကိုပင် လူအများက သူရဲဘောကြောင်မှုဟု ထင်မြင်ယူဆခဲ့ကြသကဲ့သို့ လူထုအပေါ် ကြီးမားသည့်အမှားအယွင်းတရပ် ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟုလည်း မြင်ကြသည်။
မည်သို့ဖြစ်စေ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့် မေးခွန်းမှာ ၎င်းနိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ကြီးက အမှန်တကယ်ပင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးရမှု သတင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မသိရှိရဘဲ လိမ်ညာခံထားရခြင်းလော၊ သို့တည်းမဟုတ် သိလျှက်နှင့် တမင်တကာ ရည်ရွယ် ချက်ဖြင့် လျစ်လျူရှုထားခြင်းလောဟူသည့် မေးခွန်းပင် ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများက စိုးရိမ်ပူပန်၍ ပြောဆိုနေကြသံများက ပဲ့တင်ထပ်နေသည်။ ဤအသံများက သူ၏ နားထဲသို့လည်း ရောက် နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ကြီးက အခြေအနေဆိုးရွားပြင်းထန်မှုကို မခြုံငုံမိ၊ မဆုပ်ကိုင်မိ ဆိုသည် ကတော့ ယုံကြည်ရန် ခက်ခဲပါသည်။ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ပြည်သူများထံ အကူအညီများ မရောက်ရှိရလေအောင် ပိတ်ဆို့ထား သည် ဆိုသည်မှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေကိုယ်တိုင် ကိုင်စွဲထားသည့် စံနှုန်းများနှင့် တိုင်းတာလျင်ပင် လူသား မဆန်၊ စာနာမှု ကင်းမဲ့လွန်းသည့်အသွင် သက်ရောက်နေပါသည်။
သို့သော်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အချက်တခုမှာ စစ်အစိုးရ၏ အမြင်တွင် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ဆိုသည်မှာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရရှိချိန်မှစ၍ တလျှောက်လုံး သူပုန်သူကန်များ မွေးထုတ်ပေးခဲ့ရာဒေသ ဖြစ်နေခဲ့ သည်။
၁၉၉၁ မုန်တိုင်းစစ်ဆင်ရေးအတွင်း ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေကို တွေ့ရစဉ်
ကရင်သူပုန်ခေါင်းဆောင် အများစုမှာ မြစ်ဝကျွန်း ပေါ်ဒေသတွင် မွေးဖွားကြီးပြင်း ခဲ့ကြသူများဖြစ်ပြီး ဤဒေသသည် ကရင် အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအန်ယူ) အတွက် လူသစ်စုဆောင်းရာ ရေခံ မြေခံဒေသကြီး ဖြစ်နေပါသည်။ အလားတူပင် ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များ အထိ ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗမာ ပြည်) ၏ လူသစ်စုဆောင်းသိမ်းသွင်းရာ အရေး ပါသည့် ဒေသတခုလည်း ဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။
မုန်တိုင်းဒဏ်မှရှင်ကျန်ရစ်ရသူများအနေဖြင့်လည်း ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဘိုကလေးဒေသ စစ်ဆင်ရေးမှ အဖြစ်အပျက်များကို ပြန်၍ မြင်ယောင် အမှတ်ရ နေနိုင်ပါသေးသည်။ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေဦးဆောင်၍ ၁၉၉၁ ခုနှစ်က တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် "မုန်တိုင်း စစ် ဆင်ရေး" ဟူသော အမည်ဖြင့် ကရင်သူပုန်များကို အမြစ်ဖြုတ်သုတ်သင်နိုင်ရေးအတွက် မြစ်ဝကျွန်း ပေါ်ဒေသတွင် ထိုးစစ် များပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲများလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကြုံခဲ့ရပါသေးသည်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် သူပုန်များနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော် (ကြည်းတပ်) အကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားလာခဲ့သည်မှာ သမိုင်းနှင့် ချီ၍ ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး ၁၉၄၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ဗြိတိသျှတို့ထံမှ လွတ်လပ်ရေးရပြီး မရှေးမနှောင်း ပြည်တွင်းစစ် စတင်လာ ကတည်းကဟုပင် ဆိုရပါလိမ့်မည်။
၁၉၄၉ ခုနှစ် အင်းစိန်တိုက်ပွဲအပြီးတွင် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းဦးဆောင်သည့် မြန်မာအစိုးရတပ်များက ကရင်သူပုန်များကို ရန်ကုန် မြို့၏ ဆင်ခြေဖုံး ဒေသမှနေ၍ ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် နယ်စပ်ကပ်လျှက်ရှိသော ကရင်ပြည်နယ် တောင်တန်းများပေါ်သို့ မောင်းနှင်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။
ဤသွေးထွက်သံယို ဖြစ်ရသည့် တိုက်ပွဲများအတွင်း၌ပင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နောက်ထပ် တော်လှန်ရေးသမား မျိုးဆက်သစ်များ ကို မွေးထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤခေါင်းဆောင်များအနက်တွင် စောဘသင်စိန်လည်း တဦးအပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကေအန်ယူအဖွဲ့အစည်း၌ သူက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ရာ အသက် ၈၂ နှစ်အရွယ် မကြာသေးမီ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလက ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
ဗျူဟာအရဆိုလျှင် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက အရေးပါလှသည်။ ပဲခူးရိုးမ၊ ရခိုင်ရိုးမများနှင့် ကပ်လျှက်တည်ရှိသလို ယခင်တချိန်က ဤတောင်တန်းများပေါ်တွင် ကွန်မြူနစ်သူပုန်များနှင့် တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များက ဌာနချုပ် များ၊ အခြေစိုက်စခန်းများ တည်ထောင်၍ အံတုခြားနားခဲ့ကြဖူးသည်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် ကွန်မြူနစ်များနှင့် ကရင်သူပုန်တို့၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း သိရှိထားသည့် နည်းတူ ယခင်အာဏာရှင်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းနှင့် သူ၏ တပ်မှူးများကလည်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအတွင်းတွင် ပုံမှန် ဆိုသလို ထိုးစစ်များ ၀င်ရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ကြဖူးသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သူပုန်များကို အမြစ်ဖြုတ်သုတ်သင်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းတင်ကို ဦးဆောင်စေ၍ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကို "အဖြူရောင်ဒေသ" ဖြစ်စေရန် စစ်ဆင်ရေးဆင်းစေခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သူပုန်သူကန်များ ကင်းရှင်း၍ ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်အစအန မကျန် ရှင်းလင်းစေရေးပင် ဖြစ်သည်။ တက်ကြွ၍ ထက်မြက်သည့် ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းတင်ကို နောက်ပိုင်းတွင် ရှမ်းပြည်နယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့စေ၍လည်း ကွန်မြူနစ် သူပုန်များကို နှိမ်နင်းစေခဲ့ပြန်သည်။
ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းတင်က မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ ကျေးရွာအများအပြားကို စုစည်းကာ ကျေးရွာသစ်များ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ "ကျေးရွာသစ်" များဟု ခေါ်ဆိုသော်လည်း အမှန်တွင်မူ အချုပ်စခန်းကျေးရွာများ ဖြစ်သည်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ကေအန်ယူ ၏ ရှေးဦးမဆွ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် (ကေအန်ဒီအို) များအပေါ် သစ္စာခံသူဟု ယူဆရ သည့် ရွာသားများကို စုစည်းစေ၍ တင်းကျပ်စွာစောင့်ကြပ်ထားစေသော စခန်းကျေးရွာများသာ ဖြစ်သည်။
ဤစုစည်းကျေးရွာများအားလုံးကို စစ်စခန်းများနှင့် နီးကပ်စွာ တည်ဆောက်ထားခဲ့သည်။ ထိုကျေးရွာများတွင် ရံဖန် ရံခါဆိုသလို ၀င်ရောက်ရှာဖွေရန်အတွက်လည်း အထူးကွန်မင်ဒိုတပ်ဖွဲ့များကို ညွှန်ကြားထားခဲ့သေးသည်။ ဤသို့ ရှောင် တခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးသည့်အချိန်များတွင် မတွေ့ရဘဲ ပျက်ကွက်နေသူများကို သူပုန်ဟူ၍ သတ်မှတ် အရေးယူ အပြစ် ပေးမှုများလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း၏ လက်စွဲသာဝကတဦးဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဖြစ်လာခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ်စန်းယုကို ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းတင်က အခြေအနေများကို တင်ပြခဲ့ကာ ဆန်စပါးထွက်ရာ စပါးကျီဟု ခေါ်နိုင်သည့် ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်း ပေါ်ဒေသအတွင်း သောင်းကျန်းသူနှိမ်နင်းရေး လျှို့ဝှက်စစ်ဆင်ရေးများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန် အမိန့်တောင်း ခံခဲ့ပါသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းတင် ကိုယ်တိုင်ရေးဖော်ပြခဲ့သည့် ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်စာအုပ်တွင် စကားကို နူးညံ့ပျော့ပြောင်းစွာ ပြောဆို တတ်သူတဦးဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်း သမ္မတဖြစ်လာသည့် ဗိုလ်ချုပ်စန်းယုက "ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသည် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ စပါးကျီဖြစ်သလို၊ တပြိုင်နက်တည်းမှာ သူပုန်အဖွဲ့တွေရဲ့ ၀မ်းဗိုက်ဖြစ်တယ်" ဟု ပြောကြောင်း ဖော်ပြ ပါရှိသည်။
ဤဒေသကို သူပုန်များပေါက်ဖွားရာဒေသဟု အာဏာပိုင်များဘက်က မြင်ထားကြသည့်အပြင် မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ၀င် သူပုန်အဖွဲ့များကလည်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ ကျေးရွာများမှ တနှစ်လျှင် ကျပ် ၃ သန်းကျော် အခွန်အတုတ်ကောက်ခံရရှိနေ သည်ဟု တွက်ဆထားကြသည်။ ထို့ပြင် (ကေအန် ဒီအို) အဖွဲ့ကလည်း တနှစ်လျှင် ၅ သန်းမျှ ဤဒေသမှ ငွေဝင်လမ်းရှိ သည်ဟု တွက်ဆခဲ့ကြပြန်သည်။
ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းတင် နောက်ထပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည့်တာဝန်မှာ စစ်တပ်၏ သောင်းကျန်းသူနှိမ်နင်း ရေး စစ်ဆင်ရေးများ တွင် ဒေသခံပြည်သူများ ပါဝင်လာစေရန်နှင့် သူပုန်အဖွဲ့များကို ရှုတ်ချဆန့် ကျင်ကြစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
သူပုန်အဖွဲ့များအနေဖြင့်လည်း အကြပ်အတည်းကြုံလာကြရပါသည်။ လုယက်မှုများနှင့် ဓားပြမှုများ ပို၍ဖြစ်ပွားလာပြီး ကျေးရွာလူကြီးများက စစ်တပ်ကို ၀င်ရောက်၍ လုံခြုံမှုပေးပါရန် တောင်းဆိုမှုများ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
စစ်တပ်၏ သောင်းကျန်းသူနှိမ်နင်းရေး အစီအစဉ်ကို တန်ပြန်ရန်အတွက် ကေအန်ယူအဖွဲ့က ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှ သူတို့ ရဲဘော်များကို ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသို့ စေလွှတ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းရှိ ရနောင်း မှတဆင့် ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသူပုန်ရဲဘော်များကို ကေအန်ယူအဖွဲ့အပေါ် စာနာထောက်ခံသူအများ အပြား နေထိုင်ကြသည့် ဘိုကလေးဒေသ၊ ကဒုံကနိကျေးရွာသို့ တိတ်တဆိတ် ပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။
ကေအန်ယူအဖွဲ့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာသည့်သတင်း ကြားဖြတ်သိရှိခဲ့ရာ ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းတင်က "ထော်ပိုင်စစ်ဆင်ရေး" ဆင်နွှဲ၍ ဘိုကလေးမြို့ ထော်ပိုင်မြစ်ရိုးတလျှောက်တွင် ထိုးစစ်များ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
စက်သေနတ်များတင်ဆောင်ထားသည့် စစ်ရေယာဉ်များက မြစ်ချောင်းများကြားတွင် အထူးအသုံးဝင်ခဲ့ပြီး မြန်မာစစ်တပ်၏ ခြေလျင်တပ်များကို အားဖြည့်ပေးနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဤစစ်ဆင်ရေးကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်ထိ ဆင်နွှဲခဲ့ပြီး ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းတင်ကတော့ ထိုအချိန်တွင် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကို "အဖြူရောင်ဒေသ" အဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပြီဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းတင်၏ ဒေါသအာဃာတဒဏ်ကို နောက်ထပ် ခံစားတွေ့ကြုံခဲ့ရသူများမှာ ကွန်မြူနစ်သူပုန်များ ဖြစ်သည်။ သူက စစ်ဆင်ရေးများကို ပဲခူးတိုင်းဘက်လှည့်ခဲ့ပြီး ရှိနေသည့် သူပုန်စခန်းများကို ရှင်းလင်းစေခဲ့သည်။ ဤစစ်ဆင်ရေးများ တွင် ကွန်မြူနစ်များ၏ နာမည်ကြီးခေါင်းဆောင်များဖြစ်သူ သခင်ဇင်နှင့် သခင်ချစ်တို့ ကျဆုံးခဲ့ကြရသည်။
ယင်းနောက်ပိုင်းတွင် စစ်အစိုးရအပေါ် ခုခံဆန့်ကျင် သူပုန်ထမှုများ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် ကာလတစုံတရာတိုင် ငြိမ် သက်သွားခဲ့သည်ဟု ပြောလျင် ရနိုင်ပါသည်။
နောက်တဖန် ၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှုများက မြန်မာနိုင်ငံကို ဆက်လက်ရိုက်ခတ်လာပြန်သည်။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမီးဖြစ်သူ လူထုထောက်ခံမှု အကြီးအကျယ် ရရှိနေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသို့ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် ခရီးထွက်ခဲ့ရာ လမ်းခရီးတလျှောက်တွင် ထောက်ခံအားပေးသူ လူထုက ကမ်းပြည့်လမ်းပြည့် ထွက်၍ ဆီးကြိုခဲ့ကြပြန်သည်။
ဤခရီးစဉ်တွင် လူသိများထင်ရှားသည့် အဖြစ်အပျက်တခု ဖြစ်ခဲ့သေးသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လမ်းလျှောက် သွားနေစဉ် စစ်သားတချို့က ရပ်တန့်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့ရာ သူမက အမိန့်ဖီဆန်၍ ဆက်လက်လမ်းလျှောက် ချီတက်ခဲ့သည်။ စစ်ဗိုလ်တဦးက ပစ်ခတ်မည်ခြိမ်းခြောက်၍ သေနတ်နှင့်ပင် ချိန်ထားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဒေါ်စုက အာခံရပ်တည်နေဆဲ။ ဤသို့ အခြေအနေ တင်းမာနေချိန်၌ ၎င်းစစ်ဗိုလ်က အမိန့်ကို ပြန်ရုပ်သိမ်း ပေးခဲ့သည်။ ဒေါ်စုနှင့် လူထုက ဆက်လက် လမ်းလျှောက် ချီတက်ခဲ့ပြီး သူမ၏ ရဲရဲတောက် သတ္တိပြောင်မြောက်လှသည့် ၎င်းဖြစ်ရပ်သည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသသာမက အခြားနေရာများတိုင် ပျံ့နှံ့ ကျော်စောခဲ့ပါသည်။
ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသသည် ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် ဒေါ်စုဦးဆောင်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ၏ အမာခံ ခံတပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူ့ပါတီသည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြတ်အသတ် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြန်သည်။
ဤအဖြစ်အပျက်နှင့် တချိန်တည်းသောကာလတွင် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်၌ ပြည်တွင်းစစ်မီးက ပြင်းထန်စွာ တောက်လောင် နေဆဲ၊ တိုက်ပွဲများလည်း ပြင်းထန်နေဆဲ ဖြစ်သည်။ ကေအန်ယူအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များက သောင်ရင်းမြစ်ကမ်းပါးရှိ မာနယ် ပလောဒေသတွင် ဌာနချုပ်ပြု၍ အာခံနေကြသည်။ သူတို့က မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ သူတို့၏ အမာခံများကို သုံး၍ ပြန်လည် ထိုးစစ်ဆင်နိုင်ရန်လည်း ကြံစည်နေခဲ့ကြသည်။
ကေအန်ယူအဖွဲ့က ထားဝယ်ဒေသမှတဆင့် လက်နက်များကို ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်သို့ တိတ်တဆိတ် ခိုးသွင်းခဲ့ကြ သည်။ စစ်အစိုးရ မှတ်တမ်းများအရ အစောဆုံး ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလမှစတင်၍ ဤသို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်ဟု ဆို သည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် လျှို့ဝှက် အမာခံများ အများအပြား ရှိနေကြဆဲဖြစ်ပြီး သူတို့ကတော် လှန်ရေးတွင် ပူးပေါင်းပါ ၀င်ရန် စိတ်အားထက်သန်နေကြဆဲ ဖြစ်သည်။ အများစုမှာ ယခင် ကေအန်ဒီအိုအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြပြီး ဗိုလ်မှူးကြီးသန်းတင် စီစဉ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် စုစည်းအကျဉ်းချရွာများအတွင်း၌ ဖြတ်သန်း ရှင်သန်နိုင်ခဲ့ကြသူများ ဖြစ် သည်။
ကေအန်ယူတို့က မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် တပ်မ ၇ ခုဖွဲ့ပြီး မြေအောက်ကွန်ယက်များ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးသည့်အခါ ဒေသခံ ရွာသားများကို ပြောက်ကျားစစ်ရေးဗျူဟာများ လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးရန် အဖွဲ့တခု စေလွှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ရဲလှည့်ကင်းတခုက ရှေ့ပြေး ရေဒီယို ဆက်သွယ်ရေးစက်များ၊ ကျည်ဆန်များ ဘိုကလေးမြို့သို့ သယ် ဆောင်လာသည့် အဖွဲ့တခုကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။ ဤကနဦး ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှ အစပြု၍ နောက်ပိုင်းတွင် မြစ်ဝ ကျွန်းပေါ်ဒေသ၌ အကြီးအကျယ် စစ်ဆင်ရေး ဆင်နွှဲခဲ့ရသည့် အခြေအနေတိုင် ဆိုက်ရောက်စေခဲ့သည်။
ထိုအချိန်က တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဒု-ဦးစီးချုပ်လည်းဖြစ် (န၀တ) စစ်အစိုးရ၏ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ က မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ စစ်ဆင်ရေးများကို စစ်ဦးစီး အရာရှိချုပ် ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦး၊ စစ်ဒေသတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်မြင့်အောင် တို့နှင့် အတူ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ ခဲ့ရသည်။ ဤစစ်ဆင်ရေးများက စစ်အစိုးရက "မုန်တိုင်းစစ်ဆင်ရေး" ဟု အမည်ပေး ခဲ့ကြသည်။
မြေပြင်ပေါ်ရှိ တပ်များကို အားဖြည့်ပေးရန်အတွက် ရဟတ်ယာဉ်များ၊ ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များ၊ ရေတပ်စစ်သင်္ဘောများကို ခေါ်ယူ အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး သူပုန်ဟု ထင်သမျှ သင်္ကာမကင်းဖြစ်ခံရသူအားလုံးကို ရှာဖွေချေမှုန်းခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဤစစ်ဆင်ရေးတွင် ထိခိုက်ရသူ အများစုမှာ သာမန်အရပ်သားများသာ ဖြစ်ကြပါသည်။
ဤစစ်ဆင်ရေးနိဂုံးချုပ်တွင် စစ်အစိုးရ၏ စာရင်းများအရ ရန်သူ တိုက်ခိုက်ရေးသမား ၂၇၅ ဦး ကျဆုံး၊ ၁၃ ဦး ဒဏ်ရာရ၊ ၃ ဦး လက်နက်ချလာသည်ဟု ဖော်ပြပါသည်။ သို့သော်လည်း လေ့လာသူများကမူ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု ထိုထက်ပို၍ များပြား နိုင်သည်ဟု ဆိုကြပါသည်။
ကရင်ရွာသားများက ပြောပြကြရာတွင် သေဆုံးရသူအများစုမှာ သာမန်အရပ်သားများဖြစ်ပြီး စစ်တပ်က သတ်ဖြတ် ကွပ်မျက်ခြင်း သို့မဟုတ် လေကြောင်းမှ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် သေဆုံးရသည်ဟု ပြောဆိုကြပါသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူများမှာလည်း နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံကြရပြီး တချို့မှာ လူမဆန်သော ရက်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများ ကြုံခဲ့ကြရသည်။ ရာနှင့်ချီသည့် ရွာသားအများအပြားကိုလည်း ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အထဲတွင် အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် ကလေးများပင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယနေ့တိုင် တချို့သော ကရင်ရွာသားများမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေကြရဆဲ ရှိသေးသည်။
နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြုံရချိန်တွင် ဘိုကလေး၊ လပွတ္တာနှင့် အခြားသော မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများရှိ လူများ အနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက် ထပ်မံကျရောက်ကြရသည်မှာ အထူးကြေကွဲဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်။ ယခုတကြိမ်တွင် လည်း သူက လေဘေးသင့်၍ ရှင်ကျန်ရစ်ရသူ ဒုက္ခသည်များထံ အကူအညီများ မရောက်နိုင်ရန် တားဆီးနေပြန်သည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသို့ အကူအညီပေးမည့် ရဟတ်ယာဉ်များ၊ သင်္ဘောများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ မရောက်နိုင်အောင် ဟန့်တား နေပြန်သည်။
တနည်းဆိုရလျင် မုန်တိုင်းစစ်ဆင်ရေး၏ အဆက် ပို၍ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည့် အပိုင်းကို ဆောင်ရွက်နေပြီဟု ဆိုနိုင်ပါ သည်။ ယခုတကြိမ်တွင်လည်း ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက လူသားချင်းစာနာမှု ကူညီပံ့ပိုးမှုများထက် စစ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ရည်မှန်း ချက်များကို ကြည့်ရှု ရှေ့တန်းတင် လုပ်ဆောင်နေပြန်သည်။
ယခုတကြိမ် နောက်ပိုင်း မပြီးပြတ်သေးသည့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်စစ်ဆင်ရေးတွင်လည်း ထောင်နှင့်ချီသည့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ ထပ်မံသေကြေကြရဖွယ် ရှိနေပါတော့သည်။
နာဂစ်အလွန် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ကျဆင်း
ကိုသက် | ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၀၈
မြန်မာနိုင်ငံကို နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့အပြီး ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ချောင်းသာကမ်းခြေနှင့် ငွေဆောင်ကမ်းခြေ များသို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် ခရီးသွားဧည့်သည်မရှိတော့သည့်အပြင် နိုင်ငံတကာရှိ စစ်အစိုးရသံရုံးများတွင် နိုင်ငံခြား သားများကို ဗီဇာထုတ်ပေးရာ၌ စိစစ်တင်းကျပ်မှုများပိုများလာကာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်သူ နည်းပါးလာ သဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းလည်း ကျဆင်းလျက် ရှိသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ Vega အမည်ရှိ ခရီးသွားလုပ်ငန်းက မြန်မာနိုင်ငံသို့သွားရောက်လည်ပတ်သည့် နိုင်ငံခြားသား အရေအတွက်မှာ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ကျသွားသည်ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ထူး ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းရှိ ၀န်ထမ်းတဦးက ဧရာဝတီတိုင်း ငွေဆောင်ကမ်းခြေရှိ ဟိုတယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ငပလီကမ်းခြေရှိ ထူးကုမ္ပဏီပိုင်ဟိုတယ်တို့ကို လာရောက်တည်းခိုသူမရှိသဖြင့် မေလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ပိတ်ထားသည်ဟု ပြောသည်။
“ဟိုတယ်တခုမှာ ၀န်ထမ်း ၂၀၀ လောက် ရှိတယ်။ ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ ၀န်ထမ်းတွေကို လစာပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ရတဲ့လစာထက် ခရီသွားဧည့်တွေဆီကရတဲ့ ဘောက်ဆူးငွေကပိုများတော့ ၀န်ထမ်းတွေအတွက် အများကြီး နစ်နာတာပေါ့” ဟု ထူးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းက ပြောသည်။
ထူး ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးတေဇသည် မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် နီးစပ်သူတဦးဖြစ်ပြီး ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းအပြင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ သစ်နှင့် နိုင်ငံခြား ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်များကို ပိုင်ဆိုင်သည့်အပြင် ပုဂံလေကြောင်းကုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ရှင်လည်း ဖြစ်သည်။
ပုဂံလေကြောင်းလိုင်း၏ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပခရီးစဉ်အများအပြားကိုလည်း လျှော့ချထားပြီး လေကြောင်းလုပ်သား ၂၄ ဦးကို လည်း တာဝန်မှရပ်နားထားကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေး လေကြောင်းလိုင်း၏ ရန်ကုန်-ချင်းမိုင် အပတ်စဉ်ပြေးဆွဲနေသည့်ခရီးစဉ်များကိုလည်း ခရီးသည် မရှိသောကြောင့် ရပ်နားထားသည်ဟု မန္တလေး လေကြောင်းလိုင်း၏ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် နိုင်ငံခြားသားခရီသည်များ လျော့သွားသဖြင့် ဟိုတယ် အသေးစားများ ဖွင့်လှစ် ထားသူများနှင့် ခရီးသွားလမ်းညွှန်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများလည်း စီးပွားရေးထိခိုက်လျက် ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ခရီသွားလုပ်ငန်းသည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက သာမန်အချိန်များတွင်ပင် မပြောပလောက်ပေ။ အာရှ၊ ပစိဖိတ် ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ စာရင်းများအရ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် နိုင်ငံခြားသားခရီးသည် စုစုပေါင်း ၂၄၀၀၀၀ ရှိပြီး အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သူ ၁၄ သန်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရှစ်လေးလုံးနေ့ကို ဘာကလေမြို့က ဂုဏ်ပြု
ဧရာဝတီ | ဇွန် ၁၂၊ ၂၀၀၈
မြန်မာပြည်သူပြည်သား တို့၏ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် မဆုတ်မနစ်သော ဇွဲလုံ့လဖြင့် ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှိ တက္ကသိုလ် မြို့တော် တမြို့က သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့ကို မြန်မာနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
မြောက်ပိုင်း ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် တည်ရှိ၍ မြန်မာလူဦးရေ အနည်းငယ်သာ နေထိုင်သော ဘာကလေမြို့၌ ၎င်းမြို့တော် ကောင်စီအဖွဲ့က ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် အစည်းအဝေး ကျင်းပပြီး စည်းလုံး ပြင်းထန်သော မြန်မာပြည်သူလူထုကို ဂုဏ်ပြုသည့် နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
အမေရိကန် လွှတ်တော်တွင် ဘာကလေမြို့၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဘာဘရာလီက တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက် ပါဝင်ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရရှိရန် ၄၆ နှစ်တာ ကာလပတ်လုံး မဆုတ်မနစ် ရုန်းကန်ခဲ့သည့် မြန်မာပြည်သူလူထုနှင့် နာမည်ကျော် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဆန္ဒပြပွဲ နှစ် ၂၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဘာကလေ မြို့တော်ကောင်စီက သြဂုတ် ၈ ရက်နေ့ကို မြန်မာနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
လာမည့် သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့ မှစ၍ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ထိုနေ့တွင် ဘာကလေမြို့၌ မြန်မာအမျိုးသားအလံတော်ကို လွှင့်ထူ ထားမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းအလံတော်ကို မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း၌ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်မရရှိမချင်း ဆက်လက် လွှင့်ထူထား မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအလံကို မြန်မာအမေရိကန် ဒီမိုကရေစီ သဟာရအဖွဲ့က တာဝန်ယူ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်၏။
“၈ လေးလုံး အထိမ်းအမှတ်ပွဲကို ဘာကလေ မြို့တော်ကောင်စီက အကူအညီပေးမှာ ဖြစ်ပြီး မြန်မာအမေရိကန် ဒီမိုကရေစီ သဟာရအဖွဲ့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့နဲ့ တခြားအဖွဲ့တွေ ပူးပေါင်းကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဘာကလေ မြို့တော် ကောင်စီ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တရားမျှတရေးကော်မရှင်က မြန်မာနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်သည့် အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
ထို့ပြင် ဘာကလေ မြို့တော်ကောင်စီက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဘာဘရာလီအနေနှင့် အမေရိကန်သမ္မတဘုရ်ှကို ပေကျင်းအိုလံပစ်ပွဲတော်သို့ တက်ရောက်ခြင်းမပြုရန် တောင်းဆိုစာ ရေးသားခဲ့သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားသည်။ ယင်းသို့ စာရေးသားရခြင်းမှာ တရုတ်အစိုးရက မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များကို ထောက်ခံသော ကြောင့်ဖြစ်၏။
မြို့တော်ကောင်စီက ဆက်လက်၍ လီအပါအဝင် ဆီးနိတ်လွှတ်တော်အမတ် ဘာဘရာ ဘောက်စ်ဆာနှင့် ဒိုင်ယန် ဖီယန်စတိန်းတို့အား မြန်မာပြည်အတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှုများ ကို မြန်မာစစ်အစိုးရက ခွင့်ပြုသည်ဖြစ်စေ ငြင်းဆန် သည်ဖြစ်စေ တတ်နိုင်သမျှ ပေးဖို့ရန် တောင်းဆိုထားသည်။
အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက် ကော်ပီကို ပေကျင်းအိုလံပစ် ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ လျှူကွီ နှင့် အိုလံပစ်ပွဲတော်ကို အဓိကပံ့ပိုးသည့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သော ကိုကာကိုလာ၊ မက္ကဒေါ်နယ်၊ ဂျန်နရယ် အီလက်ထရစ်၊ ဂျွန်ဆင်အန်ဂျွန်ဆင်၊ ကိုဒက်ခ်၊ လီနိုဗို၊ ပန်နာဆိုးနစ်၊ ဆမ်ဆောင်း၊ မန်နျူလိုက်ဖ် ဖိုင်နန်ရှယ် အက်တော့စ်အော်ရီဂျင်နှင့် အိုမီဂါတို့ကို ပို့မည်ဖြစ်သည်။ [
လေဘေးသင့်ဒေသရှိ ကျောင်းသားများ အခက်အခဲကြားမှ စာသင်နေရ
မိုးအောင်တင်/ကွမ်းခြံကုန်း | ဇွန်၁၂၊ ၂၀၀၈
မုန်တိုင်းဒဏ်ဆိုးဝါးစွာ ခံစားရသည့်ဒေသများရှိ စာသင်ကျောင်းများကို တခြားဒေသများနည်းတူ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ နေရာ မလုံလောက်မှုကြောင့် ကျောင်းသားများမှာ ခက်ခဲစွာ စာသင်ကြားနေကြရသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ် မန်းကလိပ်ကျေးရွာ အုပ်စု ရှိ မူလတန်းလွန်ကျောင်းတွင် ၁၂ပေx၂၀ပေနှင့် အမြင့် ၅ပေ ခန့်ရှိသည့် အဖြူရောင် ရွက်ဖျင်တဲအတွင်း ကျောင်းသားများ စာသင်ကြား နေကြရသည်ကို တွေ့ရသည်။
အဆိုပါရွက်ဖျင်တဲမှာ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှ လှူဒါန်းထား ခြင်းဖြစ်ပြီး တဲ အလုံး ၃၀၀ဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအို အဖွဲ့ တဖွဲ့၏ တာဝန်ခံတဦးက ပြောဆိုသည်။ ရွက်ဖျင်တဲကို မြေကြီးပေါ်တွင် ထိုးထားခြင်းဖြစ်ပြီး မိုးရွာ သည့်အခါ ရေ မမြုပ်စေရန် အုတ်နီခဲများ ခင်းထားသည် ကိုလည်းတွေ့ရသည်။
ကော့မှူးမြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း-ရန်ကုန် ကားလမ်းဘေး ရှိကျေးရွာ မူလတန်းကျောင်းတွင်လည်း ပြိုပျက်သွား သည့် ကျောင်းအဆောက်အဦမှ သွပ်မိုးကိုဝါးညှပ်ကာ ယာယီမိုး ထားသည့် တဲထဲတွင် ကျောင်းသားများ အကာမဲ့စွာ စာသင် ကြားနေကြရသည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများမှ မူလတန်း ကျောင်းများတွင် မူလတန်းပညာရေးမှာ အခမဲ့ပညာရေး ဖြစ်သည် ဆိုသည့် စာတန်းကိုချိတ်ဆွဲကာ ကျောင်းအပ် လက်ခံသော်လည်း ဖတ်စာစာအုပ်များမှာ တစုံလျင် ကျပ် တထောင်၊ တထောင့်ငါးရာ စသဖြင့် အတန်းပေါ်မူတည်ပြီး ၀ယ်ယူရခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ကျောင်းသာမိဘတချို့မှာ ယခုလိုကာလ တွင် ၀ယ်ယူရန်မတတ်နိုင်ကြဟုလည်း အဆိုပါ ရွာများတွင် သွားရောက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ရန်ကုန်မြို့ခံတဦး ကပြောဆိုသည်။
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့မှ ၃မိုင်ကျော်ဝေးသည့် ရွာအထက်တန်းကျောင်း တကျောင်းတွင် တပိုင်းပြိုကျသွားသည့် ကျောင်းဆောင်နှင့် ခေါင်မိုးလွင့်သွားသည့် အပိုင်းတို့ကို ပြန်လည်မပြုပြင်ရသေးဘဲ အပျက်အစီးကြားထဲတွင် ကျောင်းသားများ စာသင်ကြားနေကြရသည်။
သွပ်ပြန်မမိုးရသေးသည့် နောက်ကျောင်းဆောင်တဆောင်အား နိုင်ငံတကာမှ ကူညီသည့် စစ်စိမ်းရောင် တာလပတ်ဖျင်ကို ၀ါးဖြင့် ယာယီညှပ်မိုးထားသည်ဟု အဆိုပါရွာမှ ရွာခံတဦးကပြောပြသည်။
မိုးရွာလျင် အမိုးမှရေစိမ့်ယိုသည့်အတွက် စာသင်ခန်းထဲတွင် ထီးဆောင်းနေကြရပြီး စာသင်ကြားနိုင်ခြင်းမရှိဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
ကွမ်းခြံကုန်းမြိ့ရှိ အထက်တန်းကျောင်းအဆောက်အဦများ ကိုသာ အဆိုပါနယ်မြေတွင် တာဝန်ယူထားသည့် အေးရှား ဝေါလ်ကုမ္ပဏီမှ ဦးစားပေးပြင်ဆင်ခဲ့သော်လည်း ကားလမ်းဘေးရှိ မူလတန်းကျောင်းတချို့မှာ ယခုတိုင် မပြင်ဆင်နိုင် သေးသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
မုန်တိုင်းဒဏ် ခံရသော ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျောက်ချောင်းကျေးရွာတွင်မူ အဆောက်အဦ မလုံလောက်ခြင်း ကြောင့် တနေ့လျင် နှစ်ချိန်တက်သောကျောင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲကာ ယခုလ ၆ ရက်နေ့မှ စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်ဟု အဆိုပါ ရွာမှ ပြန်လာသူတဦးက ပြောသည်။
မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှ ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးသွားခဲ့သည့် စာသင်ကျောင်းများ အားလုံးကို နဂိုအနေအထားဖြစ်စေရန် ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း အစိုးရက အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာန (အောက် မြန်မာပြည်) မှ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးများသို့ တတ်နိုင်သမျှ စောလျင်စွာ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရန် ညွှန်ကြားချက်များကို ပေးပို့ထား သည်ဟု ပညာရေးဝန်ထမ်းတဦး က ပြောဆိုသည်။
နအဖ စစ်အစိုးရကမူ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသည့် ဒေသများတွင် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပြီးစီး၍ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် မကြာခဏ ဖေါ်ပြလေ့ရှိသည်။
အမေရိကန် လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှုကို ပါကစ္စတန်ကန့်ကွက်
သတင်း - အာဖဂန် နယ်စပ်အနီး စစ်ကြောရေးစခန်းကို အမေရိကန်တို့ လေကြောင်းက တိုက်ခိုက်လို့ ပါကစ္စတန် စစ်သား ၁၁ယောက် သေဆုံးတဲ့အတွက် ပါကစ္စတန် အစိုးရက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့က ဖြစ်ပွားတဲ့ အဲဒီ တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင်းရှိ အမေရိကန် စစ်ဘက်တာဝန်ခံများရဲ့ ကြေညာချက်အရ အာဖဂန်နယ်နိမိတ်ရဲ့ မီတာ ၁၀၀လောက်အတွင်းမှာ အာဖဂန်အရှေ့ပိုင်း ကူနာပြည်နယ်မှာ သူပုန်များ ပစ်ခတ်လို့ ညွှန့်ပေါင်း တပ်ဖွဲ့တို့ လက်တုန့်ပြန် တိုက်ခိုက်ရတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ပါကစ္စတန်နဲ့ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းပြီးမှ အဲဒီလို စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာလို့ ရှင်းထားပါတယ်။
ပါကစ္စတန် စစ်ဘက်က ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က အမေရိကန်တို့ရဲ့ လေကြောင်းက တိုက်ခိုက်မှုကို ရှောင်တခင် တိုက်ခိုက်တဲ့ သူရဲဘောကြောင် လုပ်ရပ်လို့ဆိုလိုက်ပြီး ပါကစ္စတန်နိုင်ငံခြားရေး ဌာနကတော့ အမေရိကန် ညွှန့်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့ အခြေခံကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
Better for couples to apply together
This weekareader asked aboutayoung couple that is immigrating to Canada.
The plan is for the husband to immigrate here first and get settled. Then the wife would followayear later.
They are wondering why the visa post is insisting on the wife filling out an application form at the same time as her husband when she is not planning to move here for at least another year.
This innocuous question raises an extremely important aspect of our immigration laws.
All intending immigrants to Canada must show that they qualify for selection under the category under which they are applying and must prove that they are not criminally or medically “inadmissible” to Canada.
Additionally, the principal applicant must show that his family members (i.e. spouse/partner and children) are also not inadmissible. This rule is designed to prevent the immigration of an otherwise desirable immigrant whose dependent might constituteathreat to us or to our universal health care system.
Accordingly, the wife must fill out an application form now in order to answer questions about her medical or criminal history. She must also undergoamedical examination prior to the finalization of her husband’s application whether or not she is coming to Canada now, later, or at all. If she is determined to be inadmissible to Canada, his application will also be refused.
This rule is designed to avoid two problems.
First, it would avoid the husband landing and getting settled here only later to find out that his wife can’t join him.
Secondly, it prevents the husband from becomingapermanent resident of Canada while married to an inadmissible person and acquiring the right to sponsor her and acquiring the right to appeal any refusal of such an application to the Immigration and Refugee Board.
The failure to discloseafamily member isamaterial misrepresentation that could lead to the refusal of an application or to the deportation of the applicant after landing. A family member who is not examined will no longer be consideredamember of the family class and cannot later be sponsored as such (unless it was specifically determined by an officer that they did not need to be examined).
Intending immigrants who have children in the care of their former spouse or partner must also have such children examined even if the kids are not coming to Canada. Such applicants are often met with great resistance by their former spouses who fail to understand why their child must undergo Canadian medical exams when they have no intention of letting that child immigrate here.
In this case, the wife will have to fill out forms and undergo medicals now to establish that her husband and his family members are not inadmissible. When the wife applies on her own, she will have to do it again to prove that she remains qualified to immigrate.
My advice would be for them to apply together. Once they are landed here she can return to her country temporarily while her husband gets well settled here.
ခေါငျးစဉျ IMMIGRATION ဆိုင်ရာများ
Ont. schools shouldn't 'pick and choose' with illegal immigrant kids: McGuinty
TORONTO - Ontario schools shouldn't "pick and choose" which children can enter the classroom based on their immigration status, Premier Dalton McGuinty said Wednesday amid calls for the province to adopta"don't ask, don't tell" policy to keep school doors open to all kids.
By law, no child under 18 in Ontario can be denied access to schools because of their immigration status or that of their parents, butanew study released Wednesday indicates some Toronto schools are shutting out the children of illegal immigrants.
"Ifachild shows up at the door looking for an education, our responsibility is to provide that education," McGuinty said.
"If the federal government feels that that child and that family should not be in our province, then that's something they should do something about. But we're not going to start picking and choosing which kids are going to be allowed in the classroom."
Four adults who responded to the study by the Community Social Planning Council of Toronto reported that their children had been denied enrolment inaToronto District School Board school based on immigration status.
One parent was rejected by four different schools, the report said.
Other parents were hesitant to try and enrol their children in school for fear of being reported to immigration officials by administrators, the report found.
Fifteen of the 17 respondents said immigration status came up during the enrolment process, the report said. Some were asked to provide proof of immigration status, such as passports, refugee papers, visas, or an application pending an immigration decision.
The council is urging the province to enforce the law and forbid school officials from asking about the immigrant status of students, parents or guardians, or sharing that information with others, including police and immigration officials.
Schools are turning away children who have the right to an education, yet McGuinty isn't taking any action, said NDP critic Cheri DiNovo.
"We needaprovincewide policy of 'don't ask, don't tell,"' she said.
"Our first and only duty, really, should be the education of our children. We shouldn't be visiting the sins of the parents, if you will, on their children."
Immigration rules should be enforced, but not by school officials, said Progressive Conservative critic Peter Shurman.
"Ten thousand kilometres away, families await immigration to Canada who have completed the forms inalegal way, want to come here and obviously they have children who want an education," he said.
"And the places for those children are being taken by illegals."
The study was conducted after four children attending two schools in the Toronto Catholic District School Board were apprehended by immigration officials in April 2006 and subsequently deported along with their families.
The Toronto District School Board adopteda"don't ask, don't tell" policy in May 2007 in response to the incident.
But the report said parents are still being asked their date of entry into Canada and documentation, which the board claims is necessary to receive provincial funding for English asasecond language programs and to determine whetherastudent should be charged international fees, which can cost about $12,000 forafull year.
Only 15 adults and two youths participated in the study because of limited funding and the challenge of recruiting respondents due to fear of being reported to authorities, the report noted.
An estimated 20,000 to 200,000 people who lack full immigration status live in Canada
Assembly of First Nations Chief Phil Fontaine, with headdress, shakes hands with Prime Minister Stephen Harper yesterday as Inuit Tapiriit Kanatami president Mary Simon, centre, looks on. Harper offered an official apology for more thanacentury of abuse and cultural loss involving Aboriginal residential schools.
Prime minister says ‘sorry’ for abuse in residential schools .
Three little words: “We are sorry.”
But these were history-making words yesterday, uttered inahushed House of Commons by Prime Minister Stephen Harper to Canada’s First Nations, Inuit and Métis peoples for their suffering in the once obligatory residential school system.
As he spoke, school survivors wept openly in the public galleries, their tearsatribute to the tears of every mother who cried forachild forcibly taken from her over generations.
A man in the gallery heldalone eagle feather aloft for more than an hour, throughout the apology and subsequent speeches by opposition and Aboriginal leaders.
The day began with the lighting ofasacred fire on an island in the Ottawa River in view of the Parliament Buildings where native peoples were legislated as “inferior” in 1874 and, in 1884, mandated by law to send their children away to residential schools.
It wound down after the apology with drumming and the ritual cleansing of the “smudging” ceremony in another part of Centre Bloc.
“These are happy tears,” said Holly Danyluk,aJames Bay Cree.
Harper called the schools “a sad chapter in our history.”
Assembly of First Nations Chief Phil Fontaine was close to tears when he responded to Harper’s speech. A survivor of sexual abuse in the residential school system, he was lauded for his courage when he went public with his story in the early 1990s.
“The memories of residential schools sometimes ...” he began, pausing to regain his composure, “cuts likeaknife at our souls.
“This day will help us to put that pain behind us.
Extension granted(U.S. war resister allowed to stay )
He was told to have his bags packed by Thursday, but it appears U.S. war resister Corey Glass will remain in Canada for at least another month.
Initially ordered to leave the country by June 12, Glass’ departure date has been extended to July 10, afteramonth-long appeal process by his lawyer was finally approved last week.
The former American soldier was set to become the first Iraq War resister to be deported from Canada.
Last week, all three opposition parties in the House of Commons passedamotion urging the government to allow U.S. military deserters and their families to remain in Canada as permanent residents — instead of deporting them to face possible jail time. The motion passed 137-110, but it is non-binding.
U.S. senator says Canada's oilsands won't be penalized by restrictions
WASHINGTON - Canada's oilsands won't be penalized by American legislation that prohibits the U.S. government from buying alternative fuels with higher greenhouse gas emissions than conventional sources, Senator Jeff Bingaman said Wednesday.
Bingaman,aDemocrat who chairs the Senate Energy Committee, said he supports adoptingaclarification like one in the House of Representatives that clearly exempts the oilsands.
Under that measure, restrictions wouldn't apply to general U.S. purchases, only contracts drawn up specifically limitingacertain type of alternative, non-conventional fuel.
Extracting fuel from the oilsands is notanew technology anyway, said Bingaman.
And since Canadian oil is mingled with U.S. products, "it is hard to see how (restrictions) could be enforced against Canadian oilsands in any case," he toldaforum hosted by the Canadian American Business Council.
Canada has been worried thatamajor U.S. energy bill passed last year would affect future exports of crude from Alberta, which are expected to rise to three million barrelsaday by 2015 from 1.3 million now.
The bill, which Bingaman helped write, prohibits the American government from buying alternative fuels that produce more emissions over the life ofaproject than other sources.
Environmentalists on both sides of the border support restrictions on the oilsands. They want Canada to slow development and take more steps to clean it up.
A coalition of groups, including the national Resources Defence Council, says Canada's plans to address global warming will allow carbon dioxide emissions to triple by the year 2020.
The U.S. energy bill included restrictions over fear that the government's purchasing power would be used to promote new technologies with worse emissions than current ones.
"We shouldn't be exacerbating problems like global warming, which will be difficult and expensive enough to address as it is," said Bingaman.
And regardless of who wins the U.S. presidential election this fall, he said, the next administration will certainly formulateamore active policy on climate change.
"A robust policy that reduces greenhouse gas emissions by capping them at progressively declining levels, and placingacost on carbon, will force the U.S. industrial base to evolve in new directions."
There will be an impact on Canadian businesses, he said, including changes in how cars are manufactured throughout North America to regulate carbon dioxide emissions.
The U.S. Energy Department is spending over $100 millionayear on research into new technologies to capture, transport and store carbon dioxide emitted when energy is produced.
Bingaman's committee is looking at more legislation to guide new projects and resolve regulatory issues.
Canada and the U.S. havealot of work to do together on climate change, expanding energy infrastructure, tapping natural gas sources and ensuring the reliability of electricity, he said.
"As we move intoanew American presidential administration after this election, I hope that the importance of our bi-national energy relationship is appreciated to an even greater extent than it is today."
Canada has always argued that fuel from the oilsands shouldn't be classified as alternative because it's processed in conventional facilities.
In February, Ambassador Michael Wilson wrote to the secretaries of energy, defence and state asking for an exemption from any broad interpretation of the energy bill.
He noted that oilsands emissions per barrel have fallen by 32 per cent from 1990 and the province is committed to reducing them further.
Power supply in Myanmar Yangon division almost resumes after disaster
www.chinaview.cn 2008-06-12 13:46:28
YANGON, June 12 (Xinhua) -- A 92 percent of electric power supply has resumed in cyclone-hit Yangon division of Myanmar more thanamonth afteracyclone storm hit the country, according to the local-language Myanmar Times Thursday. Nearly 5,000 damaged lamp-posts have been substituted with new ones with 4,700 downed lamp-posts put upright again, the report said, adding that new power lines, which stretch over 90,000 meters, and old such lines, which extend as 690,000 meters, have been respectively added and reinstalled, the report said.
New lamp posts were supplied from other regions of Bago, Nay Pyi Taw, Mandalay, Sagaing and Taunggyi, it also said. According to official statistics, the power sector in Yangon division inflictedaloss of over5billion Kyats (4.54 million U.S. dollars) with Yangon's east district and south district standing the heaviest. Meanwhile, Myanmar's biggest industrial zone of Hlaingtharya in Yangon, which was seriously destroyed in the cyclone storm, has almost resumed operation with 95 percent of the 800 factories going into production since late last month. The zone has resumed production after 156 collapsed lamp-posts which carry electricity were rapidly reinstalled, the zone's administration said. During the storm, most of the roofs of the factories in the industrial zone were blown to pieces and the factories' operation had to be suspended. The industrial zone sustainedaproperty loss of3billion Kyats (2.7 million U.S. dollars), according to other local news report. Myanmar claimed that the first phase of its post-disaster restoration work -- rescue and relief, has finished and it is now entering intoasecond phase of resettlement and reconstruction.
Under the post-disaster restoration plan, 30 Myanmar private companies have been taking part in the restoration work in cyclone-hit regions with assignments by the government to take the responsibility of undertaking resettlement work in 17 affected townships. The authorities also claimed that over 76 percent of communication links and over 98 percent of the water supply have resumed in the city of Yangon.တခုလိုက်ပြလိုက်တချက်ထုလိုက်လုပ်ရရင်စောက်တရုတ်မြေကြီးထဲပါဝင်သွါးမယ်......
UN says it has received just over half the money it needs for Myanmar cyclone relief
Queen Elizabeth II, Bill Gates, J.K. Rowling andaclutch of Hollywood stars have all donated generously to help Myanmar's cyclone victims, but the United Nations says funding to keep its relief effort going is falling short of the targets.
The U.N. said Thursday it has received just over half the money it has requested for cyclone relief in Myanmar, with some nations apparently delaying their donations because of concerns about restrictions imposed by the military government on foreign aid workers.
The U.N. setagoal of US$201.6 million for its relief efforts but so far has received only US$113.2 million, or 56 percent, from government donors, it said. Some US$51 million in pledges has not yet been delivered, the U.N. said.
"Funding is clearly not coming in at the rate we would hope," said Amanda Pitt,aspokeswoman in Bangkok, Thailand, for the U.N. relief operations. "Funding is urgently needed to sustain the pipeline for food and assistance."
Other agencies are faring better. The private, Christian-oriented group World Vision,amajor international relief agency, says it has raised more than US$19 million so far and expects to get an additional US$6 million to US$7 million to enable operations for six months.
The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies says it has raised 96 percent of the 52.9 million Swiss francs (US$50.8 million) it is currently seeking.
France Hurtubise,aspokeswoman for the IFRC, could not explain why the U.N. had less success in meeting its goals.
But she said the IFRC is able to tap an established, trusted network of national Red Cross and Red Crescent societies in 186 countries and that in absolute terms, the IFRC is seeking just one-quarter of what the U.N. wants.
Private agencies _ which playalarge part in relief operations _ raise much of their funds from individuals, both rich and no-so-rich.
"Obviously people see images on television of people in great need. I think there'sanatural desire to give in that situation," said World Vision spokesman James East.
"There's always going to be people who, when they see that there are people in need, especially children, want to give. People look at their own lives and see that they live in luxury compared to what they see on the television and are moved to give."
He noted that the U.N. taps different sources for its funds, primarily governments.
"What governments are interested in is access and accountability _ they want to be sure that their money is going to spent wisely and that the aid can be monitored."
Aid donors representing dozens of countries and regional organizations met late last month in Yangon and agreed to provide some cyclone aid, but warned the ruling junta they would not fully open their wallets until international aid workers are provided access to the hardest-hit areas.
The junta promised to allow foreign workers into the Irrawaddy delta, but has continued to hinder access to the area.
Celebrities also playapart in blazingafundraising trail, lending credibility by example.
Britain's Disasters Emergency Committee _aconsortium of 13 humanitarian aid agencies _ says Queen Elizabeth II and Harry Potter series author J.K. Rowling both contributed "significant donations" to Myanmar relief.
The committee, which says it has raised 13.5 million pounds (US$20.8 million) so far, would not reveal the size of their donations.
But Patricia Sanders,aspokeswoman for the group, said news of their giving was released to the press "because we wanted people to know that DEC and its members were trusted routes to give money to."
In the United States, software billionaire Bill Gates has donated US$3 million through his Bill and Melinda Gates Foundation for emergency relief efforts in Myanmar and offered software to help reunite family members separated in the cyclone.
The donations were given to the private groups Mercy Corps, World Vision and Care "so they can go in there and help as quickly as possible," according to Gates.
Hollywood is also doing its part, most notably through the nonprofit organization Not On Our Watch _ founded by actors Don Cheadle, George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt, producer Jerry Weintraub and human rights lawyer David Pressman _ which aims "to focus global attention and resources toward putting an end to mass atrocities around the world."
Not On Our Watch awarded US$250,000 to Save the Children and offered to match every additional dollar given to the aid group up to US$250,000.
U.N. spokeswoman Pitt said the U.N. hopes that funding will increase afteracomprehensive assessment of the needs of the estimated 2.4 million survivors of the May 2-3 cyclone is finished by June 20.
About 250 experts from the U.N., Myanmar's government and Southeast Asian nations headed into the Irrawaddy delta on Tuesday for the survey of 6,000 hard-hit villages. They will determine the food, water and shelter needs of the survivors, along with the cost of rebuilding houses and schools and reviving the farm-based economy.
The U.N. estimates that more than 1 million survivors, mostly in the delta, still need help more than five weeks after the cyclone struck. Cyclone Nargis killed more than 78,000 people in impoverished Myanmar and left another 56,000 people missing, according to the government.
UN says it has received 56 percent of the money it needs for Myanmar cyclone relief
The United Nations said Thursday it has received just over half the money it needs for cyclone relief in Myanmar, with some nations delaying their donations because of concerns about restrictions imposed by the military government on foreign aid workers.
The U.N. setagoal of US$201.6 million for its relief efforts but so far has received only US$113.2 million, or 56 percent, from government donors, it said. An additional US$51 million in pledges has not yet been delivered, the U.N. said.
Funding shortfalls were particularly great for emergency food operations and education, it said.
"Funding is clearly not coming in at the rate we would hope," said Amanda Pitt,aspokeswoman for the U.N. relief operations. "Funding is urgently needed to sustain the pipeline for food and assistance."
Pitt said the U.N. hopes that funding will increase afteracomprehensive assessment of the needs of the estimated 2.4 million survivors of the May 2-3 cyclone is finished by June 20.
Myanmar's military regime has asked for US$10.7 billion in foreign funds for relief and reconstruction.
Aid donors representing dozens of countries and regional organizations met late last month in Yangon and agreed to provide some cyclone aid, but warned the military junta they would not fully open their wallets until aid workers are provided access to the hardest-hit areas.
The junta has since promised to allow international aid workers into the delta, but access to the area remains difficult.
Aid agencies sayanew set of government guidelines introduced Tuesday for relief operations could further complicate and delay recovery efforts.
The guidelines, distributed by the government atameeting of U.N. agencies and private humanitarian organizations, require repeated contacts with national and local government agencies and large amounts of paperwork.
Five weeks after cyclone strikes Myanmar, UN appeal remains under-funded
11 June 2008 – United Nations aid agencies and non-governmental organizations (NGOs) have received just 40 per cent of the funding needed to meet their flash appeal launched after Cyclone Nargis battered Myanmar, more than five weeks after the catastrophe struck the Asian nation.
As of Monday this week, there have been firm contributions of $82 million – far short of the total $201 million sought – and there have been another $51 million of uncommitted pledges.
Amanda Pitt,aspokesperson for the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), told journalists today in Bangkok that humanitarian agencies are concerned that there could be shortages of food relief, shelter and other supplies in the coming weeks unless more money is provided.
“We need some halfamillion tarpaulins to help with shelter, and funding is urgently needed to sustain the pipeline for food assistance,” she said.
“Of course the overall concern is to continue to try to get systematic assistance to those most in need, and particularly to those most vulnerable to disease, malnutrition and exposure.”
More than 134,000 people are dead or missing asaresult of Cyclone Nargis and the subsequent tidal wave, which struck Myanmar on 2-3 May, causing the greatest damage to Ayeyarwady Delta area and Yangon, the country’s most populous city. As many as 2.4 million people were affected and need humanitarian assistance.
The World Food Programme (WFP) has now dispatched 11,000 tons of food assistance to affected areas, but with food prices rising due to the scarcity of many commodities, the agency is distributing cash in lieu of food in some areas.
Inajoint operation by the World Health Organization (WHO) and the national health ministry, three mobile health teams will conductaone-week mission to trace tuberculosis patients whose treatment has been disrupted.
Meanwhile,ajoint relief and early recovery assessment team, involving 250 staff from UN agencies, the World Bank, the Asian Development Bank and 18 Government ministries, will spend 10 days travelling the affected region to determine both immediate needs and longer-term issues.
Ms. Pitt said the preliminary findings of the assessment are expected to be released by 25 June.